एक spayed बिरालो को व्यवहार मा परिवर्तन Noti बिरालाहरू
त्यहाँ बिल्कुलै मिल्काउने मिल्ने र spaying वरिपरि धेरै मिथ्या छन्, र ती मध्ये एक हस्तक्षेप पछि महिलाहरु धेरै कम सक्रिय हुन्छ र वजन बढाउन शुरू गर्दछ। तर, त्यो सहि छ? र यदि यो हो भने, यसलाई कुनै पनि हिसाबले रोक्न सकिन्छ?
यस विशेषमा हामी जान्न सक्छौं कि बाँझ बिरालामा परिवर्तनहरू छन् कि छैनन्, र हामी के गर्न सक्दछौं जुन अबदेखि म शान्त जीवन बिताउन सक्छु, सजिलै।
1 क्यास्ट्रेशन भनेको के हो? र नसबंदी?
2 व्यवहारमा परिवर्तन
3 कसरी मेरो neutered बिरालालाई मद्दत गर्ने?
4 जीवाणुनाशक बिरालोको मूल्य
5 एक निष्फल बिरालाको पोस्टऑपरेटिभ
6 के शल्यक्रिया बिना बिरालोलाई सफा गर्न सकिन्छ? गोलीहरु संग?
क्यास्ट्रेशन भनेको के हो? र नसबंदी?
हामी विषयमा जानु भन्दा पहिले, थाहा पाउनुहोस् कि कुन नयाँ र स्पाइ first पहिलो हुन्छ। यस तरीकाले हामी हाम्रो बिरालोमा हुने परिवर्तनहरू अझ राम्ररी बुझ्न सक्षम हुनेछौं।
क्यास्ट्रेशन एक शल्य प्रक्रिया हो जसमा यौन अंग हटाईन्छ, जुन महिलाको मामलामा केवल अंडाशय (ओफोरक्टोमी), वा उपयोगी पनि हुन सक्छ (ओवरीओहिस्टेरेक्टमी)। जब यी अ disapp्गहरू हराउँछन्, हार्मोनल प्रक्रियाहरू हराउँछन् र जनावरको चरित्र परिवर्तन हुन सक्छ कि, उनको हानी गर्न बाट, उनको एक राम्रो जीवन जीउन मद्दत गर्न सक्छ।
यस अपरेशनमा यौन अंग अक्षुण्ण छोडिन्छ, तर प्लेब्याक रोकियो। महिलाहरुमा फेलोपियन ट्यूबहरू ligated छन्। उनीहरूको सन्तान हुनेछैन, तर तिनीहरू जोसका साथ जारी राख्नेछन्।
यदि, अनावश्यक कचौराबाट जोगिन चाहनुको साथसाथै, बिरालाले केही शान्त जीवन पनि बिताउने चाहना राखिएको छ भने, उनलाई कस्ट्र्याट गर्न सिफारिस गरिएको छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं जनावरको कामुकतालाई हानि गर्न चाहानुहुन्न भने, त्यसो भए तपाईले नसबन्दीको लागि छनौट गर्नुहुनेछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, एक वा अर्को छनौट गर्नु भनेको धेरै व्यक्तिगत निर्णय हो, म तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु त्यो हो हामी बिरालाहरु मानवीय छैनमेरो मतलब: एक spayed बिल्ली गर्मी याद छैन, तर बस अपरेटि from को ठीक पछि उनी आफ्नो तालिका संग जारी राख्नेछ।
अब, थाहा दिनुहोस् कि उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तनहरू छन् कि छैनन्। यदि हामीले हाम्रो बिरालालाई बाँझी राख्यौं भने, कसरी हर्मोनल प्रक्रियाहरू जारी रहन्छन् त्यसले केही पनि परिवर्तन गर्दैन; अब यदि हामीले उनलाई कस्ट्रेट गर्यौं भने हो, हामी परिवर्तनहरूको एक श्रृंखला याद गर्नेछौंविशेष गरी पहिलो हप्ताहरूमा।
प्रत्येक बिराला विश्व हो, अद्वितीय र अपरिवर्तनीय, र सामान्यीकरण गर्न सकिदैन। तर जब तपाई धेरै वर्षदेखि बिरालाको हेरचाह गर्नुहुन्छ, र आज तपाईले आफ्नो जीवन यी अविश्वसनीय जनावरहरूसँग बाँड्न जारी राख्नुहुन्छ, हो। समयको साथ तपाईंले केहि परिवर्तनहरू देख्नुभयो उसको चरित्रमा। व्यक्तिहरू जुन मैले अहिले सम्म देखेको छु:
तिनीहरू अझ बढी घर बनाउँदछन्: सबै बिरालाहरू जुन मसँग सधैं थिए हामी बाहिर जान अनुमति दिएका थियौं, र ती अहिले हामीसँग भएको पनि यसले गर्न सक्छ। म मेरा बिरालाहरू कास्ट्रेट गर्नका लागि लिएर तिनीहरू months महिनाको उमेरमा थिए (केइशा बाहेक जो अत्यन्त प्रकृतिका थियो र मैले उनलाई months महिनामा लिएँ, अहिले years बर्ष अघि)। २ महिना देखि they सम्म तिनीहरू जबरदस्त पिल्पीहरू थिए, धेरै, ज्यादै अप्ठ्यारो र शरारती। Of बर्षको उमेरदेखि उनीहरूले घरमा धेरै समय बिताउन थाले।
तिनीहरू शान्त हुन्छन्: यो अचानक हुने घटना होइन, तर बिस्तारै तपाईंले याद गर्नुभयो कि तिनीहरू शान्त छन्, अधिक आसीन। हो, यो परिवर्तन सदाको लागि रहन सक्छ र त्यो तपाईंले अपेक्षा गरे पछि भित्रको बिरालाको बच्चा फेरि बाहिर आउँनेछ।
थप रूपमा, तातो नभएकोले तपाईले हताश रातको बिरालोलाई बिरालो बोलाउने चिन्ता लिनुपर्दैन, किनकि तपाईको फ्युरीले कसैको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक पर्दैन, उसलाई मान्छेको बाहिरी वा मनपर्दो खाना दिनको लागि।
तिनीहरूले बोसो पाउँदैनन्: हामीले कति पटक सुनेका छौं कि बाँझी बिरालाले तौल बढाउने प्रवृत्ति हुन्छ? धेरै, सही? ठिक छ, यो आधा सत्य हो। वास्तवमा, तिनीहरू केवल बोसो प्राप्त गर्नेछन् यदि तपाईं उनीहरूसँग खेल्नुहुन्न, जसले तिनीहरूलाई घण्टा निद्रा, बोर्याउन खर्च गर्दछ। तर यदि तपाईं प्रत्येक दिन रमाईलो गर्न समय खर्च गर्नुहुन्छ, यसलाई लाइट फिड वा कास्ट्रेट बिरालाहरूको लागि विशेष दिन पनि आवश्यक पर्दैन, मलाई विश्वास गर्नुहोस् 😉
तिनीहरू लामो बाँच्दछन्: कास्टेरेसनले धेरै गम्भीर रोगहरू रोक्छ, जस्तै स्तन वा डिम्बग्रंथि क्यान्सर, जुन 90 ०% मामिलामा घातक हुन सक्छ। उनीहरूबाट जोगिनको एक प्रभावकारी तरीका (पूर्ण रूपमा होइन, तर यसलाई अनुबंध गर्ने सम्भावना एकदम घटाउँदै) तिनीहरूको अपरेटिंग गरेर उनीहरूको यौन अंगहरूलाई हटाएर हो।
कसरी मेरो neutered बिरालालाई मद्दत गर्ने?
यदि यो पहिलो पटक हो कि हामी बिरालासँग बस्छौं र हामी उनलाई न्युटोरिनमा लग्छौं, यो धेरै सामान्य छ कि हामी उनलाई सोच्दछौं कि उनलाई उनको नयाँ जीवनको लागि सहयोग चाहिन्छ कि, वा यदि हस्तक्षेपले उनलाई केही हानि गर्छ भने। खैर चिन्ता गर्न रोक्नुहोस् यी जनावरहरू छिटो निको हुन्छन् अपरेशनको (सामान्यतया, days दिन पछि), र त्यसो भएमा तपाईले तिनीहरूको हेरचाह जारी राख्नु पर्ने छ जसरी डेट भइसक्यो, शायद अधिक पाउन्ड प्राप्त गर्नबाट बच्न खेल सत्रहरूलाई बढी महत्त्व दिँदै।
अवश्य पनि, यो महत्त्वपूर्ण छ उसलाई खाना भन्दा बढी नदिनुहोस्, त्यस पछि हो, तपाईं धेरै बोसो पाउनुहुनेछ, विशेष गरी यदि तपाईं एक धेरै आसीन जीवन जीउनु हुन्छ।
हामीले हेरेका थियौं, बिचको स्पाइing वा न्युटरि very एकदम फरक सर्जिकल अपरेसनहरू हुन्। तपाईंको पशु चिकित्सकसँगै निर्णय लिनुहोस् जुन तपाईंको साथीको लागि उत्तम हो, र त्यसपछि तपाईंले भर्खरै उनीहरूको कम्पनीको मजा लिन जारी गर्नुपर्नेछ.
जीवाणुनाशक बिरालोको मूल्य
यद्यपि यो धेरै महत्त्वपूर्ण खर्च होईन, यो सत्य हो कि केही महिनासम्म पिग्गी बैंक बनाउनु आवश्यक छ ताकि पारिवारिक अर्थतन्त्रमा यसले असर नपरोस्। तैपनि, यो पशु चिकित्सक र अपरेशनको प्रकारमा सबै माथि निर्भर गर्दछ, तर अधिक वा कम म तिमीलाई भन्न सक्दछु कि लागत निम्न छ:
बिरालो: -50०-१०० युरो।
बिरालो: -०-40० युरो।
बिरालो: -150०-१०० युरो।
बिरालो: -०-100० युरो।
एक निष्फल बिरालाको पोस्टऑपरेटिभ
शल्यक्रिया पछि कसरी हाम्रो कपालको ख्याल राख्ने? ठूलो हेरचाह संग 🙂। हामीले उसलाई शान्त कोठामा छोड्नु पर्छ, भुईमा उनको ओछ्यानसहित कि ऊ उफ्रिनु पर्दैन। त्यस्तै गरी, यो अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ कि उनको लिटर बक्सको नजिक तर टाढा टाढा आफ्नो फिडर बाट सम्भव छ, उठेको केहि घण्टा पछि उसले एनेस्थेसिया पेशाब गर्नेछ। कोठा मा तपाइँको लिटर बक्स राख्नु को लागी एक विकल्प यो भुइँमा राख्नु हो सुरक्षात्मक बिस्तर डायपर, जो ओछ्यान कभर गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ जहाँ जो सार्न सक्दैनन् बस्नु पर्छ।
यो धेरै आवश्यक छ कि हामीले पशुचिकित्सकले हाम्रा बिरालाहरूलाई पीडा वा अप्ठ्यारो महसुस गर्नबाट रोक्न औषधीहरू दिनुपर्दछ। अरु के छ त, हामीले उनलाई कुनै पनि समयमा एक्लै छोड्नु पर्दैनखैर, तपाईं आफैलाई चोट पुग्न सक्छ।
यदि हामीसंग अधिक बिरालाहरू छन् भने हामी तिनीहरूलाई बिरालाबाट टाढा राख्नु पर्छ। किन? धेरै सरल: भर्खरै संचालित बिरालोले पशु चिकित्सकको दुर्गन्ध तर तनावको पनि छ। बिरालाहरू गन्धबाट धेरै निर्देशित हुन्छन्, यति धेरै कि यदि तिनीहरूले फरक गन्ध पत्ता लगाए भने उनीहरूले शत्रुको रूपमा देख्नेछन्। यसलाई रोक्नको लागि, बिरालालाई कोठामा पुन: प्राप्ति गर्न छोडिनु पर्छ बाँकी बिरालाहरूसँग पुनर्मिलन गर्नु अघि।
के शल्यक्रिया बिना बिरालोलाई सफा गर्न सकिन्छ? गोलीहरु संग?
हो सहि। अवस्थित गर्भनिरोधक गोली बिरालाहरूका लागि मौखिक रूपमा प्रशासित। एक पशुचिकित्सकले उनीहरूलाई तोक्नु पर्छ, जसले हामीलाई कति दिन र कुन दिनहरू दिनुपर्दछ हामीलाई बताउँछ, अन्यथा ती उनीहरू जस्तो प्रभावकारी हुँदैनन्।
त्यहाँ पनि छ गर्भनिरोधक इंजेक्सन, कि पेशेवर तिनीहरूलाई राख्छ। फाइदा यो हो कि हामीले उनलाई गोली दिन कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन किनभने यो उसलाई दिन आवश्यक हुँदैन, र हामीले यो पनि भन्नुपर्दैन कि हामीले उसलाई खराब समयमा जान बाध्य पार्नु पर्दैन ( बिरालाहरू, सामान्यतया, ट्याब्लेटहरू घृणा गर्छन्)।
तर अझै र सबै कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यहाँ साइड इफेक्ट हुन सक्छ, यी जस्तै:
स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्यो
गर्भाशय क्यान्सरको जोखिम बढ्यो
गर्भाशय संक्रमणको सम्भावना बढेको
यस कारणले, दीर्घकालीन उपचारको रूपमा कहिले पनि प्रयोग गर्न सकिदैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » जिज्ञासा » एक spayed बिरालो को व्यवहार मा परिवर्तन
मारिसोल एस्ट्राडा भन्यो
एउटा बिरालोको बच्चा आइपुगे। म घरमा छु र उनी धेरै मोटो छिन, उनीमा सुगन्धित निपल्स छैन, यो अधिक छ न त उसले उनलाई देख्न सक्छ र उसले मेरो बिरालालाई देख्न सक्दैन तर ऊ धेरै मायालु र धेरै मोटा छ, ऊ धेरै खान्छिन्, कसरी तिमीलाई थाहा छ यदि उनी गर्भवती वा बोसो हो
Marisol estrada लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं उनको पेट छुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं बच्चाको बच्चा छ भनेर हेर्न। यदि तपाईंसँग छ भने, तिनीहरूले थोरै हड्डी महसुस गर्नुपर्छ।
जे भए पनि, एक हप्ता कुर्नु उत्तम हो। यदि days दिनमा तपाईंको वजन परिवर्तन हुँदैन वा निप्पल्स फुल्छ भने, यो किनभने तपाईं गर्भवती हुनुहुन्न।
माभिस रिन्कन भन्यो
नमस्कार, म भेनेजुएलाबाट हुँ, उनीहरूले यस बर्षको फेब्रुअरी my मा मेरो बिरालालाई कास्ट गरे, व्यक्तिहरूको मद्दतले यो काम गर्ने जिम्मामा रहेको एउटा जग हो, मुख्य कुरा यो हो कि उनीहरूले उसको र घाउमा फ्लानेल कम्मर लगाए। पीडित भयो, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र दिनको दुई पटक मलाई क्रीम लगाउन र मेडेकासोल पाउडर राख्न आदेश दिएँ। पहिले नै यो समयमा घाउमा अझै उद्घाटन छ, उसले मलाई भन्यो कि यो कम्मरमा छ किनकि तिनीहरूले एलिजाबेथन राखेका छन् यदि तिनीहरू यहाँ आउँछन् वा छोड्दछन् भने केही पनि हुँदैन। मलाई थाहा छैन अरू के गर्ने, के यदि ऊ धेरै शरारती छ र धेरै खाइरहेको छ भने, म त्यो पर्याप्त खेल संग कि नियन्त्रण गर्न को लागी ताकि उनी धेरै मोटो छैन।
माभिस रिन्कनलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, कम्मरमा र कपडाको कुनै पनि अन्य टुक्रा पूर्ण रूपमा सिफारिस गरिदैन: s
हामी हेरौं, यदि तपाईले देख्नुभयो कि बिरालोले सामान्य जीवन बिताउँदछ, जुन उसले खान्छ इत्यादि, यस्तै राम्रो संकेत हो। तर म सिफारिश गर्दछु, पशुचिकित्सक नै नभई, उनलाई पछाडि पशु चिकित्सकमा लैजान (उही समान वा अर्कोमा) टाँका लगाउन कि त्यो घाउलाई बन्द गर्न।
तपाइँ बार्किबु.का पशुचिकित्सकहरूसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ
एडुआर्डो कोर्टेस भन्यो
हामीले हाम्रो बिरालालाई बाँझीमा राख्यौं र त्योभन्दा पहिले उहाँ आफ्ना बहिनीहरूसँग राम्ररी सँगसँगै पुग्नुभयो (हामीसँग दुईवटा बिरालाको बच्चा छ), उनीहरू धेरै चंचल थिए तर तिनीहरूले हाम्रो बिरालाको बच्चाहरूलाई कस्ट्रिस्ट गरे पछि उहाँ उनीहरूसँग सामान्य रहनुभयो तर उनीहरू उहाँमा बढ्न थाले, उनीहरूले उनलाई गन्ध गरे। ऊ कुकुर वा केही चीज जस्तो गरी उसको खरोंचसमेत आइपुग्यो, जब ऊ उनीहरूको छेउमा ठूलो हुँदै जान्छ, तर जब उसले उनीहरूसँग खेल्ने कोसिस गर्दछ, तिनीहरू टाढा सर्छन् र उनीमाथि हाँस्छन्, के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो?
PS मेरो बिराला बाँझ छैन, केवल मेरो बिरालो।
एडुआर्डो कोर्टेसलाई जवाफ दिनुहोस्
सम्भवतः यो उनीहरूको गन्ध हो। बिरालाहरूको गन्धको भावना हाम्रो भन्दा धेरै विकसित भएको छ, र जब उनीहरूको यौन अंगहरू हटाइन्छ, यो अब त्यस्तै हुनु हुँदैन।
मेरो सल्लाह भनेको फेलिवे नामक उत्पादन किन्नु हो। यो एक विसारकमा र स्प्रे बोतलहरूमा बेचिन्छ। म अत्यधिक डिफ्यूजरलाई सिफारिश गर्दछु, किनकि यस तरीकाले उत्पादन दिनभर, र कोठामा कार्य गर्न सक्षम हुनेछ; यस तरिकाले ती बिरालाहरूले शान्त महसुस गर्नेछन्।
यो पनि अत्यधिक एक बिरालालाई प्रेम गर्न सिफारिस गरिन्छ, र त्यसपछि बिरालो मादाको गन्ध छोड्न। सुरुमा यसले काम नगर्न सक्छ तर दिनहरू बित्दै जाँदा, बिरालाहरूले बिरालोलाई उनीहरूको जस्तै मिठो गन्ध लाग्न थाल्छ, त्यसैले तिनीहरूले फेरि स्वीकार्नेछन्।
अवश्य पनि, तपाईं धैर्य हुनुपर्दछ।
मारिया लील भन्यो
हिजो उनिहरूले क्याटी, मेरो बिरालोको बच्चा ... स्वभाविक, चंचल, घबराए र मलाई बाहेक अरूसँग युराटा कास्ट गरे। हामी सँगै सुते हिजोदेखि, उनले मलाई धूम्रपान गरिरहेकी थिई, उनले मलाई हेर्यो कि उनी मलाई घृणा गर्छिन्, मैले उनको कोठा, कम्बल, तकियाहरू तयार गरिन र उनले खाइन्, उनले पानी पिए तर उनी लुक्छिन् र यदि मैले उनलाई बोलाए भने उनले नोट लिइन र उनी बाहिर गइन्। आँगनमा, जहाँ यो चिसो छ र मलाई थाहा छैन कसरी उनी उसलाई भित्र राख्यो यो टाढा जान्छ? वा उनी सँधै मलाई डराउँछिन् ... उनी 30० घण्टाको लागी शल्यक्रिया गरीरहेकी छिन् र मलाई थाहा छैन यदि एनेस्थेसियाले उनलाई विचलित गर्यो, वा ऊ तनावग्रस्त छ वा यदि उनीहरूमा कुनै आपत्ति छ? मलाई धेरै नराम्रो लाग्छ ... ऊ त्यस्तो व्यवहार गर्दछ जसरी उसले चोट पुर्याएको थियो। म तपाईंलाई सराहना गर्दछु यदि तपाईंले टिप्पणीको उत्तर दिनुभयो भने। कृतज्ञ
मारिया Leal लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया लील।
कहिलेकाँही उनीहरूले आफ्नो मुड थोरै बदल्छन्, किनकि उनीहरूले पीडा वा असुविधा महसुस गर्छन्। मलाई लाग्दैन कि म यो जस्तो लामो समय सम्म रहनेछु। धैर्यवान हुनुहोस्, र न्यानो खानाको क्यान तपाईंको नजिक आउने प्रस्ताव गर्नुहोस्। बिस्तारै ऊ पक्का हुनेछ, निश्चित रूपमा।
नमस्कार, मेरो बिरालाको बच्चा एक हप्ता र आधा अगाडि बाँझिएको थियो, उनको व्यवहार अचानक परिवर्तन भयो, सुरुमा उनी मलाई घृणा गर्छिन् अब उनी नजिक आउँछिन् तर निद्रामा छिन्, उनी ढीला छिन्, उनी पछाडि उफ्रिनु भन्दा अगाडि र जोखिम देखे पनि कतै चढाइन्, उनी विन्डोज फ्रेममा घण्टा पनि बिताए, म th औं तलामा बस्छु, अब यो बिल्कुल नजिक आउँदैन, दिन र रात मेरो बन्दमा वा मेरो ओछ्यानमा, मेरो खुट्टामा घुम्न, म मेरो टाउकोमा सुत्नु भन्दा पहिले, धेरै थोरै खान्छ, मैले सबै खाईदिनु भन्दा पहिले ऊ बिरामी छ?
प्रिस्किल्लालाई जवाफ दिनुहोस्
सिद्धान्तमा यो सामान्य छ कि यो केही फरक छ। तर यदि उनको व्यवहार यस्तो कम समय मा आमूल परिवर्तन भएको छ भने, उनी वास्तवमा बिरामी हुन सक्छ। म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु, जे भए पनि पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्।
मद्दत गर्नुहोस्, मैले भर्खरै मेरो--महिना पुरानो बिरालोको बाँझ पक्रिए, उनी क्रोधित छिन्, उनी खाउँदिनन् र उनी २ 8 घण्टा भन्दा बढि उपवास बसेकी छिन्। म कति बेर कुर्छु? न पानी, न त नरम खाना। ऊ मसिन्छ र उफ्रन्छ र ऊ भुइँमा छ। ऊसँग एलिजाबेथन छ तर पशु चिकित्सकले मलाई यो नलिन भन्यो। म उनीलाई खाएको छ कि भनेर हेर्नलाई लुगा लगाउन चाहन्छु। म के गर्ने, भुँइमा छोडिदिनुहोस्? तपाई कहिले नखाईकन जान सक्नुहुन्छ?
यो सामान्य छ उसलाई यस्तो महसुस गर्न, चिन्ता नलिनुहोस्।
यदि उनी एक दिनको लागि नखाई जानुभयो भने, केहि पनि हुँदैन, ध्यानमा राख्दै कि उनी भर्खर बाँझी छिन्, तर दोस्रोबाट उसले पहिले नै केही खानुपर्दछ।
यदि पशु चिकित्सकले तपाइँलाई अझ राम्रो एलिजाबेथन हटाउन नदिनुहोस्, यो नगर्नुहोस्। जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नुभयो कि उनले वास्तवमा नेकलेसलाई घृणा गर्दछ, र यदि तपाइँ जाडोमा हुनुहुन्छ भने, उनको लुगा लगाउनुहोस्।
र हो हो, यसलाई सुधार नभएसम्म यसलाई भुइँमा नै छोड्नुहोस्।
टेरेसा मार्चेट्टी भन्यो
मैले मेरो बिरालोलाई बाँझ पारेकी थिएँ र एलिजाबेथनको कारणले उनीमा नराम्रो समय थियो, उनले खाइन र वजन घटाएकी थिइन। तर अब उनी राम्ररी खाँदैछिन् र धेरै मायालु छिन्, शल्यक्रिया पछि चरित्र परिवर्तन सामान्य हो ???
टेरेसा मार्चेटीलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, वास्तवमा प्राय: जसो ठ्याक्कै त्यो कारणको लागि बिरालाहरू कास्ट गर्न सिफारिस गरिन्छ: तिनीहरू शान्त हुन्छन्।
नमस्कार, मेरा दुई बिरालाहरू (पुरुष र महिला) एक बर्ष पहिले अपरेट गरिएका थिए, र तिनीहरू पहिले नै डेढ वर्ष पुरानो हो।
मेरो बिरालोको व्यवहार, तथापि, केहि महिना पहिले देखि परिवर्तन भएको छ, किनभने जब बिरालोले उनीसँग खेल्ने कोसिस गर्छिन्, उनी हिर्काउँछिन् र चिच्याउँछिन् कि उनी मारिएकी छिन्।
ती दुबैले सामान्य खाए, तर उनी धेरै बढि जान्छन्, र म वास्तवमै बुझ्न सक्दिन किन उसको मुड यति खराब भयो।
कहिलेकाँही मनोवृत्तिमा यो परिवर्तन सामान्य हुन्छ। म एक फेलिवे डिफ्यूजर किन्न सिफारिस गर्दछु र यसलाई कोठामा राख्छु जहाँ उनीहरू प्राय: धेरै समय बिताउँछन्; यसले बिरालालाई केही शान्त राख्दछ।
साथै, जब तपाईं उनीहरूलाई स्नेह दिन जानहुन्छ, दुबैलाई पाल्नुहोस्, र दुबैलाई बिरालो व्यवहार गर्नुहोस्। यस तरिकाले तपाई दुबैलाई नराम्रो लाग्नेछ।
मेरो बिरालाको बच्चाले उनलाई4दिनको लागि स्ट्रेलाइज गरी उनको मुड परिवर्तन गर्‍यो, उनीले मलाई छोइनन्, उनी मसँग हुर्काउँछिन् र मसँग कुकुरहरू पनि छन् र उसले उनीहरूलाई पूर्ण आनन्दबाट बाहिर खसाल्यो, मलाई थाहा छैन किन उसको मुड परिवर्तन भयो।
छोटो समय बित्यो। धेरै जसो सम्भवतः यो अनौंठो लाग्न सक्छ, र हुनसक्छ अलि घोर पनि हुन सक्छ।
समय समयमा उनको भिजेको खानाको डिब्बा प्रस्ताव गर्नुहोस्, र एक स्ट्रि withको साथ समय-समय उहाँसँग खेल्नुहोस्। तपाईं देख्नुहुनेछ कति अलि अलि अलि कम शान्त हुन्छ।
Tsukayama Okubo भन्यो
नमस्कार म मेरो बिरालाको बच्चालाई संचालन गर्न लागेको हुँ, जो लगभग २ बर्षको छ। म लामो समय पर्खाईएको हुनाले ऊ सँधै कम तौलको हुन्थ्यो र म चिन्तित थिएँ तर पशु चिकित्सकले भन्छ कि ऊ पहिले नै पर्याप्त तौलमा छ। ऊ ज्यादै उरा हो जब उसले नराम्रो महसुस गर्छ र म उसको प्रतिक्रियाबाट चिन्तित हुन्छु जब ऊ निको हुन्छ, विशेष गरी उसको सानो भाइसँग किनभने अचानक उसलाई म धेरै माया गर्छु र अचानक उसलाई मार्न चाहन्छ हाहाहा। के तपाइँले उनलाई शान्त र आरामदायी राख्न केहि सिफारिश गर्नुभयो?
Tsukayama Okubo लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं Feliway किन्न सक्नुहुनेछ, एक डिफ्यूजरमा, र यसलाई कोठामा राख्नुहोस् जहाँ तपाईंको बिल्ली तबसम्म सकीनेछ जबसम्म ऊ निको हुँदैन। यसले तपाईंलाई शान्त हुन मद्दत गर्दछ
नमस्कार, मैले मेरो बिरालालाई days दिन अगाडि बाँझी लिएको थिएँ र परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले परिवर्तन गर्थें, यति धेरै गर्नुहुन्न, अब यो दिनभरि यसले यो तापिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो सामान्य हो? म के गर्न सक्छु?
Bernabe लाई जवाफ दिनुहोस्
हो यो सामान्य हो। चिन्ता नगर्नुहोस् 🙂।
उसलाई धेरै माया दिनुहोस् र छोटो समयमा यो पारित हुनेछ।
तपाईं उसलाई एक उत्पादनको साथ शान्त हुन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ फेलिवे। तिनीहरूले यसलाई एक विसारक वा स्प्रेको रूपमा बेच्छन्; र तपाइँको केसको लागि बिसारक अझ राम्रो हुनेछ।
नमस्कार ...। मसँग 9-महिनाको बिरालाको बच्चा र दुई कुकुरहरू छन् जो सडकबाट बाहिर आउँछन् उनीहरू राम्रोसँग खेल्छन्, तिनीहरू सँगै सुते तिनीहरू एक अर्कालाई माया गर्छन् ... म बिरालालाई छोड्ने जोसका लागि पर्खिरहेको छु उनको पछि किनकि म यो पहिले गर्न सक्दिन, उनी राम्री राम्री छिन्, उनी मसित सुत्छिन् हामी एक अर्कालाई धेरै लाड बनाउँदछौं !! म धेरै डराउँछु कि उनी नराम्रो हुनेछन् वा उनी कुकुरहरू र मसँग खेल्न छोड्नेछन्, तर मलाई उनको एक्स कास्ट्रेट गर्न आवश्यक छ कि उनको ईर्ष्याले मलाई निद्रा बिना छोड्दै छ, ऊ पीडित छ र म पीडित छ ... के यो परिवर्तन हुँदैछ? उनको चरित्र कुकुर संग र म संग? म उनलाई मेरो बहुमूल्य भारत हुनबाट रोक्न चाहन्न: '(
मारूलाई जवाफ दिनुहोस्
यो जान्न गाह्रो छ कि कसरी नयाँ बिरालो पछि बिरालो परिवर्तन हुन्छ। के म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि मसँग9वटा बिरालाहरू कास्ट्रेट भएका छन् (fe महिला र ma पुरुष) र ती सबै उत्तमको लागि परिवर्तन भएका छन्। तिनीहरू शान्त, अधिक मायालु, अझ बढी घरेलु पनि भएका छन्।
त्यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उनलाई क्यास्ट्रेटमा लानुहोस्। तपाईं डाह बाट जोगिन र सबै समावेश छ कि।
नमस्कार, मैले मेरो बिराला शनिवारदेखि बाँझी राखेको छु र आज बिहिवार हो, उनको व्यवहार बढी बढी जोडिएको छ, त्यो हो, ऊ ज्यादा कुचुरिएर छ, ऊ मसँग सधैँ रहन चाहन्छ र ऊ लाजमर्दो कुरा गरिरहेकी छे। मैले याद गरें कि भर्खरै पपु र यो पनि फुलेको छ र स्तनहरू पनि फुलेको छ, घाउ धेरै निको भयो तर मलाई दुई दिन सम्म स्तनहरुमा भएको परिवर्तनको बारेमा चिन्तित छ कि यो हर्मोनल परिवर्तन हुनेछ ??? बिरालाहरु लाई कम गर्न को लागी मैले केहि उचित एंटी-इन्फ्लेमेटरी दिनु पर्छ। मैले देख्न सकिन कि तपाईले दुखाइ महसुस गरिरहनु भएको छ तर तपाईले चाहानुहुन्छ भने म तपाईको पेटलाई हल्का बनाउँदिन। तपाईं मलाई सुराग दिन सक्नुहुन्छ कि यो सामान्य हो कि होइन।
Greta लाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, यो सामान्य छैन। तपाईको काटिएको क्षेत्र अलि बढि फुलेको हुन सक्छ, तर बढि केहि छैन। यदी धेरै दिन पछि उनलाई राहत दिन यदि गाह्रो छ भने, मेरो सल्लाह उनलाई डाक्टरलाई जाँच गर्न लैजान भनिएको छ, नत्र ऊ नराम्रो हुनेछ।
म जिम्मेवारीहरू मन पराउँदिन किनभने मैले मेरो कुकुर हराएको बेलामा भएको डिप्रेसनको कारण हो। तिनीहरू भन्छन कि बिरालाहरूले आफ्नो ख्याल राख्छन्, तर मलाई थाहा छैन के गर्ने। म स्वीकार गर्छु वा गर्दैन?
ग्रहण गर्नु वा नपार्नु अत्यन्तै व्यक्तिगत निर्णय हो, म तपाईंलाई के भन्न सक्छु कि कुकुरहरू कुकुरहरू भन्दा केहि बढी स्वतन्त्र छन्, तर वास्तविकतामा भिन्नता भनेको यो हो कि उनीहरूलाई हिंड्नको आवश्यकता पर्दैन। हेरचाहको सन्दर्भमा, तिनीहरूलाई उही चीज चाहिन्छ: खाना, पानी, साथी र स्नेह, खेलहरू, र पशु चिकित्सा ध्यान।
मार्टा बिटियर्स भन्यो
तपाईंको मार्गनिर्देशनको लागि धन्यबाद तर मसँग बिरालो छ जुन मैले सडकमा उठाएँ, मैले उनलाई एक बर्ष भन्दा बढी समय भइसकेको थिएँ, उनीसँग तीनवटा डेलिभरीहरू थिए र मैले उनलाई कास्ट्रेट गर्ने निर्णय गरें किनभने तब मलाई बिरालोको बच्चा पत्ता लगाउन धेरै काम भयो। , the महिना अघि उनी अन्तिम डेलिभरीमा न्युटर्ड थिइन्, म एउटा पुरुष बिरालोको बच्चालाई धर्मपुत्र बनाउन सक्दिन र म घरमा बसें, पहिलो तीन or चार महिनासम्म उनी सधै राम्रो आमा र धेरै नम्र र मायालु भइन्। लगभग दुई महिनासम्म उनी घरबाट निस्किन् र २ sometimes घण्टामा उनी घर फर्कन्दिनन्, उनी घरैमा निदाउँदिनन् र बिरालोको बच्चालाई उनले पूर्णरुपले अस्वीकार गरे, उनी पहिले नै old महिनाको छन, उनले हमला गरे, उनी आक्रामक आवाज निकाले र सब भन्दा नराम्रो अवस्थाले गयो र उसले उसलाई लगभग माया र ब्रश गर्न दिदैन, यो ईर्ष्या वा कास्ट्रेसनबाट हुनेछ… .म के गर्न सक्छु?
मार्टा बिट्राइजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई व्याख्या गर्नुहोस्: बिराला आमाहरू आफ्नो प्राकृतिक अवस्थामा आफ्ना बच्चाहरू भन्दा अलग हुन्छन् जब तिनीहरू लगभग २- months महिना पुरानो हुन्छन्। करीव 2-3-। थप महिना पछि, जब, साना बच्चाहरू and र months महिनाको बीचमा हुन्छन्, तिनीहरू आफ्नी आमासँग मिलन गर्न सक्दछन्।
यो अनौठो हो, मलाई थाहा छ, तर बिरालाहरू त्यस्ता हुन्: जब उनीहरू तातोमा छन्, तिनीहरूले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूसँग विवाह गर्न सक्दछन्।
मलाई के लाग्छ तपाईंको बिरालो र उनको छोरोको साथ हुन्छ आमाले विश्वास गर्छन् कि बिरालोको बच्चा छ वा चाँडै प्रजनन युगको हुनेछ। गर्मीको समयमा, बिरालाहरूले सम्भावित जोडीहरूलाई आकर्षित गर्न विशेष फेरोमोनहरू उत्पादन गर्दछन्, जसले तिनीहरूको शरीरको गन्ध परिवर्तन गर्दछ।
बिरालाहरू गन्धको बारेमा निकै उन्मत्त हुन्छन्, त्यसैले आमा बिरालोले आफ्नो बच्चाको "नयाँ" गन्ध सहन नचाह्न सक्छ र त्यसैले हिंड्नको लागि डि-तनावको आवश्यकता छ।
गर्नु पर्ने? बिरालोको बच्चालाई नभेर्दै। यो म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु। यस तरिकाले तपाईं उसलाई ईर्ष्या गर्नबाट जोगाउने छैन (केवल सबैमा समावेश हुने), तर यो पनि निश्चित छ कि आमाले उहाँलाई फेरि स्वीकार्नेछ र फेरि उहाँसँगै बस्नुहुनेछ।
धेरै धेरै धन्यबाद, म तपाईको मार्गनिर्देशनको कदर गर्दछु र तपाई बिलकुल सही हुनुहुन्छ किनकि बच्चा पहिले नै months महिनाको छ र उनीहरू पहिले नै झगडा गरिरहेछन् भनेर देख्न पाउनु भयानक छ कि उनीहरूलाई हावामा लडिरहेको देख्नु अब नयाँ कुरा हो। म तपाईंको सल्लाह पालन गर्दछु र बिरालोको बच्चा नउटर गर्नेछु। शुभ दिन र म तपाईंको प्रतिक्रियाका लागि धन्यबाद नवीकरण गर्दछौं।
धन्यबाद 🙂 नयाँ बर्षको शुभकामना!
अना टोरेस भन्यो
नमस्कार, म एक केटीको आमा हुँ जसको दुई बिरालाहरू छन्, तिनीहरू दाजुभाइहरू हुन् र उनीहरू करीव months महिना पुरानो छ, हिजो उनले उनीहरूलाई कास्ट्रेटमा लगिन् र उनीहरू एक अर्कासँग धेरै आक्रामक छन् र उनीहरू यसभन्दा अघि म धेरै चिन्तित थिए किनभने म चिन्तित छु। हामीलाई मन पर्यो कि उनीहरू कसरी दुबैसँग मिले, म के गर्न सक्छु कि तपाईं दुबै शान्त हुन र पहिले जस्तो फर्कनुहोस्।
Ana Torres लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू अचानक प्रसारण गन्धका कारण खराबमा पर्न सक्छन्। पशु चिकित्सा क्लिनिकमा गइसकेपछि, तिनीहरूको शरीरले ठाउँको गन्ध मिसाएको छ, र जब तिनीहरू घर फर्कन्छन् उनीहरूसँगै हुँदा उनीहरूलाई अनौंठो महसुस हुन्छ।
मेरो सल्लाह उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा पुनर्प्राप्ति नभएसम्म अलग राख्नु हो। यस बीच, तपाईले उनीहरूलाई पहिलेको जस्तो गन्ध लिन लगाउनुपर्नेछ, र यसको लागि तपाईंले उनीहरूलाई धेरै माया गर्नु पर्छ, आफ्ना हातहरू र कपडाहरूसहित। यस तरिकाले, तपाईं आफ्नो शरीरको गन्ध, उनीहरूलाई थाहा छ कि एक गन्ध र उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्दछ।
नमस्कार, अर्को शुक्रबार मेरो बिरालोको बाँझ बाँकी राख्ने भेट भयो, मलाई नर्वस लाग्छ किनभने यो प्रक्रियाको लागि मैले बिरालाको बच्चा लिने पहिलो पटक हो तर मलाई लाग्छ कि यो सबैका लागि राम्रो छ, उनको लागि राम्रो लाग्ने ठाउँ तयार पार्नुहोस् ऊ। यो मनपराउँदछ तर मेरो घर दुई तल्लो अग्लो छ र मलाई थाहा छैन कि उनलाई सुत्ने कोठामा नै छोडिदिनु राम्रो हुन्छ वा मलाई ऊ तल र माथिल्लो तल्लामा जान दिन सक्छ जब ऊ निराश नहोला, म पनि उनलाई भोलि घरमै भिस्ने योजना बनाउने योजना मैले उनलाई कपासको शर्टबाट बाहिर ल्याई ताकि उनी आफ्नो शरीरमा केहि लगाईएको महसुस गर्न सक्छन र म तिमीलाई चाहान्दिन कि उही दिनमा उही नयाँ महसुस गरें। अपरेसन, किनभने मलाई लाग्छ कि यति धेरै उनीसँग धेरै तनाव भएको छ। तिम्रो के बिचार छ?
म तिमीलाई राम्ररी बुझ्छु। पछिल्लो शुक्रवार मैले मेरो बिरालोको बच्चालाई न्युटर्ड गरें र यद्यपि यो पहिलो पटक थिएन जब मैले शल्य चिकित्साको लागि बिरालो लिएकी थिएँ, म एकदम नराम्रो समय थियो। तर वास्तवमै यो खराब छैन। म तिमीलाई भन्दैछु, म अपोइन्टमेन्ट परिवर्तन गर्ने क्रममा थिएँ किनकि म थाँहा थिए।
मेरो सल्लाह यो हो कि हो, यो कोठामा राख्नुहोस् जहाँ यो शल्य अपरेशन पछि हुन सक्छ। भुइँमा ओछ्यान राख्नुहोस्, र साथै कचौरा बक्स पनि जब उसलाई आफैलाई राहत दिईरहेको छ।
स्वेटर वा केही कपासमा राख्नुहोस् ताकि उसले घाउ चाट्न नपाउन् भनेर यो एक राम्रो विचार हो, तर तपाई घर पुग्ने बित्तिकै राख्नुहोस्, एनेस्थेसियाबाट निको हुनु भन्दा पहिले।
साहसी हुनु, तपाई कसरी देख्नु हुन्छ तपाईको कल्पना भन्दा छिटो निको हुन सक्नुहुन्छ 🙂
पैट्रसिया रुइज गिरेरो भन्यो
हेलो १० दिन अगाडि उनीहरूले मेरो चन्द्र बिरालोलाई कास्ट गरे तर मैले याद गरे कि उनी थोरै नै खान्छिन् र सुक्खा जस्ता पातलो छिन् कि उनी पनि नराम्रो हिसाबले सञ्चालन गरिन् कि उनी मर्न सक्छिन्।
पैट्रसिया रुइज गिरेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि १० दिन अघि तपाई व्यावहारिक ढ recovered्गले निको हुन सक्नुहुन्छ; अन्यथा, घाउ राम्रो निको नहुन सक्छ। के तपाईंलाई थाहा छ यदि यो गन्ध गन्ध छ भने?
तल झर्दै र थोरै खाँदै, म सिफारिस गर्दछु कि तपाईं उनलाई पशु चिकित्सकमा फिर्ता लैजानुहोस्, जे भएमा।
यदि तपाईंले उसलाई बाँझी राख्नु भयो भने उनी तातो हुने नै छ किनभने उनीहरूले गरेको काम उनको फलोपियन ट्यूबहरू बाँधेको थियो।
तपाईं गर्भवती हुनुहुनेछैन, तर तपाईं अझै पनि बिरालोहरूलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ 🙁
एक मात्र विकल्प हुन सक्छ कि ऊ तातो हुँदा उसलाई बाहिर नदेऊ, वा उसलाई कास्ट्रेटमा लैजानुहोस्।
क्यास्ट्रेसन एक अपरेसन हो जुन प्रजनन ग्रंथिहरू हटाउने समावेश गर्दछ, ताकि एकपटक जनावर काम गरिसकेपछि, यसले तातो हुने छैन।
नैन्सी भ्यालेन्सिया भन्यो
मसँग 6-महिना पुरानो बिरालाको बच्चा छ, उनी एक महिना अगाडि neutered थियो तर उनी धेरै गम्भीर भएको छ, उनी खेल्न चाह्दिनन्, उनी आफ्नो समय कोठामा सुत्दै बिताउँछिन् र उनी पहिलेको जस्तो मायालु छिन्। , यो मलाई यो देखेर धेरै दुखी बनाउँछ। केहि गर्न सकिन्छ जुन गर्न सकिन्छ?
नैन्सी भ्यालेन्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो सल्लाह तपाईले पशु चिकित्सकलाई लैजानुहुन्छ। छ महिनाको बिरालो पछाडि कुद्नुपर्दछ, उफ्रँदै, पूरै आनन्दमा बर्बाद गर्दै, न्यटरेटेड भए पनि। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, यो किनभने केहि गलत छ।
यो गम्भीर नहुन सक्छ, तर यसलाई जोखिम नगर्नु राम्रो हुन्छ।
मलाई मेरो बिरालाको बच्चासँग समस्या थियो किनभने उनी घर भर पीडित थिईन्, मैले उनलाई सुन्दर बनाएकी छु कि यसले यो व्यवहारमा सुधार ल्याउँछ कि भनेर।
तपाइँको हर्मोनहरू नियमित हुनको लागि कति समय लाग्न सक्छ?
यो प्रत्येक बिरालो मा निर्भर गर्दछ 🙂। त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जसले केहि दिन पछि नै उसको व्यवहारमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देख्छन्, तर त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जुन केहि महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुले कुनै परिवर्तन देख्दैनन्।
हामीले कुर्नु पर्छ।
जे भए पनि, तपाइँको पशु चिकित्सकले संक्रमणको लागि जाँच गरेको छ? ट्रेबाट पिसाब गर्नु संक्रमणको एक मुख्य लक्षण हो। यदि तपाईंसँग छैन भने, म यसलाई परीक्षामा ल्याउन सिफारिस गर्दछु।
Hellooooo… मेरो--महिना पुरानो बिरालाले दुई पटक तातो पारेको छ। अब र दुई हप्ता अघि हामी याद गर्छौं कि उनी अत्यन्त स्नेही बन्छिन र खेल खेल्दा हामीलाई काट्छिन ... उनी शान्त छिर्छिन् र गाउँदैछिन् (उनी ठूलो स्वरले रोक्दैनन्)। हामी उनलाई माया गर्छौं जब उनी यस्तो हुन्छन् ... के यो हुन्छ कि जब म उनलाई बाँझ पार्छु, के उनी त्यो प्यारा आचरण गुमाउने छन्? मलाई मात्र मनपर्दैन कि त्यो विरलै मूत्र र मेरो श्रीमान्को खेलको ब्यागलाई चिनो लगाउँछिन् ... मलाई थाहा छैन यो "माचो" जस्तो गन्ध छ कि भनेर किन थाहा छ र त्यसैले हहाहा पनि हो। मेरो शंका स्पष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
मोरेलालाई जवाफ दिनुहोस्
यदि उनीहरूले उनलाई न्युटरमा लगे भने, यदि पशु चिकित्सकले प्रजनन ग्रंथीहरू हटाउँदछन् भने, उनले त्यो ताप र व्यवहारलाई हटाउनेछ जुन यस चरणमा हुँदा यसले ग्रहण गर्दछ।
तर बिरालाहरु हस्तक्षेप पछि शान्त र अधिक मायालु बन्छ।
नमस्कार, म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु, मसँग दुई बर्ष अघि एक राम्रो बिरालो छ र उनी मसँग सधै एक्लै थिईन् ... र अब, करिब दुई महिना अघि, मेरो छिमेकी घरको अगाडिबाट, उनीसँग पनि बिरालो छ कि सुन्दर छैन र जब मैले उनलाई देख्छु उनीहरु लडछन् तर उनीहरु आफैंमा आक्रमण गर्ने छैनन् तर मेरो घिनलाग्दो हालतमा उनीहरु ... र मेरो छिमेकीले उनको बिरालालाई बल दिएन ... उनी उसलाई बाहिर यार्डमा छोडछिन् ... र उनी उसलाई पोषण पनि दिदैन ... यो कुरा बाहिर जान्छ कि बिरालो मेरो खाना खान आउँदछ, मैले उसलाई बिरालो पारे पनि ... मलाई के गर्ने वा कसरी गर्ने थाहा छैन ... छिमेकीले उनलाई परित्याग गर्यो उनको बिराला लाई ... र ऊ मेरो साथ झगडा गर्छे।
र के तपाईं कसैलाई कल गर्न सक्नुहुन्न महिलालाई वेक अप कल दिनका लागि?
दुई बिरालाहरू सँगै हुनको लागि, तपाईं एकै समयमा दुबैलाई क्यान दिन प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, र दुबैमा ध्यान दिनुहोस्।
नमस्कार मोनिका, के बिरालाहरू राम्रा भइसकेपछि तिनीहरूको चरित्र परिवर्तन गर्छन्? मेरो मतलब, यदि तिनीहरू चंचल थिए भने उनीहरू त्यस्तो हुनबाट रोकिन्छन्, मैले ती मामलाहरू देखें। के तपाईंलाई यो भएको छ?
म यस समयमा गर्मी मा मेरो बिरालोको छ, तर म उनको ख्याल राख्दै छु ताकि उनी गर्भवती नहुन् र म उनलाई अर्को महिना कास्ट्रेट गर्नेछु। मेरो डर यो छ कि म चंचल र सक्रिय हुन रोक्छु। उनी धेरै चंचल, छिटो छिन र मायालु छिन् र म सधैं उनीसँग खेल्छु ताकि मलाई श doubt्का लाग्छ उनी मोटो हुनेछन्। म जे भए पनि उनलाई कस्ट्रेट गर्छु, तर घटनामा कि उनको चरित्र परिवर्तन हुन्छ, केहि गर्न सकिन्छ?
र जानकारीका लागि धेरै धन्यबाद। आशिष्
मलाई के भएको छ बिरालाहरु कास्ट्रेट हुनु हो र समयको साथ तिनीहरू थोरै शान्त हुनेछ र बढी मायालु बन्नेछन्, तर खेल्ने इच्छाले यसलाई गुमाइन। तिनीहरूले बस जीवनलाई अलिक बढी शान्तपूर्वक लिन्छन्।
तर प्रत्येक बिरालो एक संसार हो। तपाईंको बिरालोले उनको चरित्रलाई बिल्कुल बदल्न सक्दैन।
एंजेलिका गिल भन्यो
म मेरो बिराला बाँझी बनाएको थियो, एक महिना पहिले क्यान्डी र अब उनी यस्तै व्यवहार गर्दैछिन् कि त्यसले मलाई दु: ख दिन्छ, ऊ कभरमा पेसा गर्छ, उसले कभर्समा शट गर्छिन् वा घरमा कतै उनले मेरो लागि चीजहरू तोड्छिन्, उनी पहिले जस्तो थिइनन् शल्यक्रिया, उनी सफा र न्यायकर्मी थिईन्, उनको बालुवाले उनको राम्रो खाना सफा गरिरहेकी छिन तर अब उनी नराम्रो व्यवहार गर्दछिन म के गर्ने थाहा छैन।
एंजेलिका गिललाई जवाफ दिनुहोस्
गत महिनामा घरमा केहि परिवर्तन भएको छ? मेरो मतलब, त्यहाँ छुट्टिएर आएको छ वा कोही नयाँ आएको छ?
बिरालाहरूलाई परिवर्तनहरू मन पर्दैन, यति धेरै कि तिनीहरूले दुर्व्यवहार गर्न सुरु गर्न सक्दछन्।
मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं उनीसंग सकेसम्म धेरै समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ: उनीसँग खेल्नुहोस्, उनको स्नेह दिनुहोस् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यदि उनी दुर्व्यवहार गर्छिन् भने उनीसँग रिसाउनुहुन्न। गर)।
धैर्यताका साथ, अलि अलि गर्दै तपाईंले उसलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्ने बनाउनुहुनेछ। स्प्रे बिराला रिपेलन्ट्स प्रयोग गर्नुहोस् उसलाई आफुलाई नहुनबाट जोगाउनुहोस् जहाँ उनी हुनु हुँदैन।
नमस्कार, यो पहिलो पटक हो कि १० बाँझी बिरालाहरू पछि हुन्छ, २० दिन पछि यो बिरालाको बच्चा नसोचेको पछि अलि बढि फुलेको छ जस्तो कि ऊ सामान्य गर्भावस्थामा छ, ऊ दुखी छैन, र उसले सामान्य पानी पिएकी छ। तर त्यो सूजन धेरै चिन्ताजनक छ
के यो नरम वा कडा महसुस छ? यदि यो पूर्व हो भने, यो हुन सक्छ कि उसलाई आन्द्रा परजीवीहरू थिए। जे भए पनि, पशु चिकित्सकले उसलाई हेरेमा चोट पुर्याउँदैन।
यी सुन्दर प्याला मित्रहरुलाई बाँच्न मा यो बहुमूल्य जानकारी को लागी धन्यवाद छ।
म जान्न चाहन्थें कि भेन्ट्रल नसबंदी (पेटमा) र पार्श्व नसबंदीको बिच के भिन्नताहरू छन्।
मसँग दुईवटा बिरालाहरू छन् जुन १ days दिन अगाडि बाँझीकरण गरियो र उनीहरूको चीरा छेउमा बनाइएको थियो।
तिनीहरूले सबै समयमा गर्मी मा राखे यो धेरै असुविधाजनक भएकोले सबै ठाउँमा उनीहरूले पिसाब गरे। मेरो डर उनीहरूले फेरि पेशाब गर्ने छन्। यो हुन सक्छ?
बिरालाहरु मध्ये एक एकदम चलाखी हो। उनी आफैंलाई लाड गर्न वा हुर्काउन दिदैनन्, उनको आनीबानी परिवर्तन हुन सक्दछ, म उसलाई अंगालो हाल्छु र उनीसँग सहमत छु, तर उनी अझै घृणास्पद छिन् 🙁
म तिमीलाई भन्छु:
नसबंदी एक अपरेसन हो जसमा बिरालालाई के गरिन्छ फेलोपियन ट्यूबहरू बाँध्नु हो। यसले उनीहरूलाई फोहोर हुनबाट रोक्दछ, तर प्रजनन अंगहरूलाई बढी वा कम अक्षुण्ण राखेर तातो हराउँदैन।
कास्टेसनको साथ, अंडाशय हटाइन्छ, जसले तातो र गर्भवती हुने खतरालाई हटाउँछ। अपरेशन अधिक महँगो छ, र बिरालाहरू प्राय: recover दिन लाग्छ, कहिलेकाँही हप्ता।
मलाई लाग्छ पार्श्व स्पाको मतलब तपाईको क्यास्ट्रेसन हो।
यदि तपाईंले गर्मी को बारे मा पशु चिकित्सकलाई बताउनु भयो भने, सम्भावना यो छ कि तपाईंको बिरालाहरू राम्रा छन्।
यदि एक बिरालाले तातो भएकोले पिसाब गर्‍यो भने, उनीलाई फेरि यो गर्न गाह्रो छ किनकि उनी त्यसबाट जान पाउदिन। तर यस्तो हुन सक्छ कि बानी नै भएको छ (यो दुर्लभ छ, तर यो हुन सक्छ)।
तपाईको अन्य बिरालाको सम्मानका साथ, उनी शान्त हुन सक्छिन्, तर यदि उनी आफैंमा एक्लैले पनि ... राम्रो छ भने, केहि पनि सम्भव छ। जे भए पनि, समय समयमा इनामको रूपमा उनको बिरालो क्यान दिनुहोस् ताकि उनी तपाईलाई बढी विश्वास गरीन्। निस्सन्देह उनी मन पराउँछन् र तपाई उसलाई अलि बढी लाड गर्न सक्नुहुन्छ।
एलेक्स गैसेनी गार्सिया भन्यो
नमस्ते मोनिका, यो केहि समय अघि भएको छ कि एक बिरालाले च्यालेटमा खान आयो, उनी गइन् र अन्तमा फिर्ता आईन्, उनी गर्भवती छिन् र हामीले बस्ने निर्णय गर्यौं-उनी पहिले नै हुर्किसकेकी छन् र बिरालाका बच्चाहरू घरमा दुई महिनाका लागि छन्। किनभने उनीले उनीहरुलाई हुर्काईरहेकी छिन् र बिराला or बर्ष भन्दा कम उमेरको छ, पशु चिकित्सकले हामीलाई भन्यो, "यदि मैले उनलाई कास्ट्रेट गरें र कम कुर्नु पर्ला भने मलाई के गर्ने, म के गर्ने, मोनिका?"
एलेक्स गसेनी गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
अधिक कूसो राख्नबाट रोक्नको लागि, उनलाई कास्ट्रेट गर्नु राम्रो हुन्छ। दुई महिनासम्म बिरालाका बच्चाहरूले आफैंमा खान सक्दछन, र सम्भव छ कि आमाले चाँडै तिनीहरूको हेरचाह गर्न छोड्नेछ।
जिप्सी अराउजो भन्यो
मैले मेरो बिरालाको बच्चाहरूलाई बिरालोको एउटा कूवा राख्न दिएँ, तर उनीहरू एक हप्ताको उमेर भन्दा पहिले उनी नशामा उत्रे, हामीले उसलाई पशुचिकित्सकमा लग्यौं र उसलाई बचाउन सफल भयौं, बिरालाका बच्चाहरूलाई नर्स बिरालाले स्वीकार्यो। बिरालोको बच्चा एक महिना अघि निको भयो र उनीसँग बिरालाको बच्चा नभएकोले मलाई लाग्छ कि उनी तातो भइरहेकी थिइन र मैले उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र मलाई लाग्छ कि यो नसबंदी थियो। यो एक हप्ता भयो र उनी धेरै अति सक्रिय छिन, म उसलाई शान्त बनाउन के गर्न सक्छु
जिप्सी अराउजोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो तपाईको टिप्पणीको लागि उत्सुक छ; विपरित सामान्यतया हुन्छ, त्यो हो, तिनीहरू शान्त हुन्छन्। यो अपरेशनको एक अस्थायी "साइड इफेक्ट" हुन सक्छ। जे होस्, तपाईं उनको व्यायाम र ऊर्जा बर्न प्राप्त गर्न उनीसँग खेल्न कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ।
नमस्कार ऊ मेरो गर्मी मा थियो जब म आज बिहान मेरो बिल्ली राम्रो थियो। सबै कुरा धेरै राम्रोसँग गयो, तर अब यो तातोसँग जारी रहन्छ (विशिष्ट मेयो, सवारी स्थितिमा ...)। के यो सामान्य छ किनकि हर्मोनको बाँकी अवशेषहरू जुन तपाईंको शरीरमा रहन्छ? के म चिन्तित हुनुपर्दछ?
हो यो सामान्य हो। म तपाईंलाई यो पनि भन्न सक्छु कि मेरो एउटा बिराला कहिल्यै तातो परेको छैन र एक चोटि भन्दा बढी मैले उसलाई सवारीको अवधारणा स्वीकार गरेको देखेको छु।
चिन्ता नगर। यो तपाइँलाई हुन सक्छ।
आज मेरो बिरालोको आर्य कास्ट्रे, एनेस्थेसियाको प्रभाव स्पष्ट रूपमा अझै पनि टाढा जान सक्दैन, यसले कति समय लिन्छ? म पनि भन्न चाहन्छु कि उसको आँखा अलि अलि परेको छ, के यो सामान्य छ? वा मैले यसको परामर्श लिनु पर्छ? तपाईं कहिले सामान्य हिंड्न सक्षम हुनुहुनेछ?
खैर, सबैभन्दा धेरै सजिलो कुरा यो हो कि एनेस्थेसिया पहिले नै already बितिसकेको छ।
अपरेशन पछि आँखाको मनमा यस्तो हुनु सामान्य हो।
तिमीले उसलाई २-24--48 घण्टा हिंड्दै देख्नेछौ।
नमस्ते! मसँग दुई छ-महिना पुरानो बिरालाहरू छन् र मैले ती भर्खर कास्ट गरें। ती मध्ये एक सामान्य छ तर अर्को धेरै धेरै चालक हो। पहिले मैले सोचे कि यो डरको कारण हो तर शारीरिक रूपमा ऊ ठीक छ यद्यपि हरेक चोटि उनकी बहिनी उहाँ नजिक आउँदा ऊ सुन्दरी र मूर्ख भयो। उनीहरू जहिले पनि राम्रोसँग प्राप्त भएका थिए र म यो जान्न चाहन्छु कि यो केवल डरको कारणले हो वा म तिनीहरूलाई अलग गर्न थाल्छु।
बच्चालाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू शरीर गन्धका कारण यस्तो व्यवहार गर्न सक्दछन्। जे होस् ती दुबै उही पशु चिकित्सक क्लिनिकमा थिए र एउटै गन्ध आयो, उनीहरूले धेरै अनौंठो महसुस गर्न सक्दछन्।
सब भन्दा राम्रो कुरा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा निको नहोउन्जेल अलग राख्नु हो, र ओछ्यानहरू साटासाट गर्नु हो जुन उनीहरूलाई अर्कोको गन्धको लागि बानी हुन्छ।
मेरो सात-महिनाको बिरालो6दिन अघि बाँझिएको थियो र म फेरि राम्रो खाएको छैन, म धेरै चिन्तित छु, र मैले उसलाई एकदमै तल देखेको छु।
आज उसले कुनै पनि प्रकारको खाना चाखेको छैन र मलाई थाहा छैन यो सामान्य छ कि छैन
के कसैले कृपया मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ??
अलेक्सान्ड्रालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँ अपरेशनबाट राम्रोसँग निको नहुन सक्नुहुन्छ। मेरो सल्लाह उनीसँग भएको कुरा हेर्न फिर्ता लिनको लागि हो।
मैले करीवaबर्षको सडकबाट बिरालो लिएँ। मैले उनलाई बाँझीमा राखें, उनी about महिनाको लागि शल्यक्रिया गरीरहेकी छिन् र अहिले उनी छोटो समयको लागि एकदम नराम्रो मुडमा छिन्, मसँग घरमा धेरै बिरालाहरू छन् जससँग उनी धेरै राम्ररी बस्थे तर अब उनी उनीमा बढ्छे र हिट छिन्। ती सबै, उनी वरिपरि कसैलाई चाहन्न, यस्तो देखिन्छ कि सबै कुराले उसलाई पिरोल्छ ... यो क्यारेक्टरको कारणले हुन सक्छ कि उसको चरित्र परिवर्तन भएको छ? ?
Tiare लाई जवाफ दिनुहोस्
यो अपरेशनको कारण हुन सक्छ, हो। तपाईं उनलाई कोठामा तीन दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ र ओछ्यान बदल्नुहोस् ताकि उनी फेरि स्वीकार्न सक्छिन्।
नमस्कार, म तपाईंलाई भन्छु कि मेरो बिरालाले उनको एक महिना भन्दा अलि बढी अपरेसन गरिसकेको छ तर दुई दिन अघि मैले महसुस गरें कि उनी तातो भैरहेकी थिईन्, अब यदि उनी नराम्रो शल्यक्रिया गरीरहेकी छिन् भने, के उनी अर्को अपरेशन गर्न सक्छिन्?
गाब्बीलाई जवाफ दिनुहोस्
यदि यो पहिलो गर्मी पछि सञ्चालन गरिएको थियो भने, यो व्यवहार पूर्ण रूपमा हराउने छैन कि मामला हुन सक्छ।
मलाई लाग्दैन कि पशु चिकित्सकले उनलाई नराम्रोसँग संचालित गर्यो, तर जे भए पनि तपाईलाई शंका छ भने, ऊ के सोच्छ भनेर अर्को पशु चिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस्।
सिद्धान्तमा, यदि यो राम्रोसँग सञ्चालन गरिएको थियो भने, मलाई लाग्दैन कि यसलाई केहि महिनामा फेरि सञ्चालन गर्दा समस्या हुनेछ, तर यो एक पेशेवर द्वारा बताउन राम्रो हुन्छ।
नमस्कार म एक प्रश्न संग परामर्श गर्न चाहान्थे। धेरै महिना अघि मैले सडकबाट बिरालो लिएँ जब उनी months महिनाकी थिइन्। तिनीहरू अविभाज्य भएको छ र तिनीहरू एक अर्कालाई पागलपन गर्दछन्, उनी उनीसँग धेरै मायालु छिन्। मैले उनलाई अहिले सम्म अपरेसन गरेको छैन, के म उनलाई नेटर्युटि or गर्न वा बाँझो बनाउन अझ इच्छुक छु? र एक पटक शल्यक्रियाले ठूलो बिरालोसँग तपाईंको आइडिलिक सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्दछ? यो उस्तै जात spay वा न्युटर हुन सक्छ? एक हप्ता अघि मैले उहि उमेरको सडकबाट अर्को बिरालो लिएँ र न्युरेट गरें र यस्तो लाग्दछ कि उनीहरू पहिले नै मित्र बनिरहेका छन् बिरालाको साथ तिनीहरू हुर्किए र हल्ला गरे कि उनीहरूले आक्रमण गर्ने छन् जस्तो लाग्छ, के यो सामान्य छ? यो आक्रमण वा मात्र खेलिरहेका हुनेछ? तर तिनीहरू सँधै एक अर्काको लागि खोजिरहेका हुन्छन् र अन्य समयमा उनीहरू साथीहरू देखिन्छन्। धन्यवाद, जे भए पनि के यो साँचो हो कि नर बिरालाहरू सँगसँगै जान सक्दैनन् वा तिनीहरू सजीलो भए पनि तिनीहरू प्रायः क्षेत्रीय हुन्छन्?
म उनलाई बिरामीको लागि होइन, तर अनावश्यक कूवाबाट जोगिन सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईं बाहिर जानुहुदैन भने, त्यहाँ सँधै अवलोकन गर्न सकिन्छ।
उनको एक पटक संचालित उनको व्यवहार परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्राय: यो राम्रोको लागि हो। तिनीहरू धेरै शान्त र अधिक मायालु बन्छन्, यद्यपि यो पूर्ण रूपमा ठीक नभएसम्म यसलाई बन्द कोठामा राख्दछ, किनकि यसले पशु चिकित्सा क्लिनिकबाट गन्ध ल्याउँछ जुन बिरालाहरूलाई पटक्कै मनपर्दैन।
यो उनीहरूको लागि सामान्य हुँदै आएको छ र समय-समयमा बढ्दै जान्छ र स्नोर्ट गर्दछ। राम्रा साथीहरू पनि समय समयमा यो गर्छन्। चिन्ता नगर्नुहोस् 🙂।
तपाईंको अन्तिम प्रश्नको रूपमा, पुरुष बिरालाहरू साथमा आउन सक्छन्। सबै बिरालाहरू (पुरुष र महिला) क्षेत्रीय हुन्, यदि तिनीहरू राम्ररी पोखिएका छन् भने। के हुन्छ त्यहाँ गैर-कास्ट्रेटेड पुरुषहरू आक्रमक हुन्छन् जब त्यहाँ तातो मादा बिल्ली हुन्छ। तर यदि ती neutered छन्, कुनै समस्या छैन।
नमस्ते! मैले मेरो बिरालाको बच्चालाई सोमबार, मे २२ कास्ट्रेट गर्न लगेँ, म जान्न चाहान्छु कि ऊ भाग्न चाहेको कुरा के यो सामान्य छ? किनभने म उसलाई मेरो कोठामा बक्समा राख्छु र ऊ छोड्न खोज्दछ: के उसको व्यवहार सामान्य छ?
अबीलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, यो सामान्य हुन सक्छ। यो धेरै अनौंठो महसुस गर्नुपर्दछ। दिनहरू बित्दै जाँदा तपाईं अझ राम्रा महसुस गर्नुहुनेछ।
शुभ प्रभात, मसँग एक बर्षे पुरानो बिराला छ जुन heat पटक तातो हुँदै आएको छ। हामीले उनलाई बाँझी राख्न निर्णय गर्यौं र त्यसबेलादेखि उनी धेरै भेटघाट भएकी छिन्, उनले आफूलाई छुन र ह्यान्डलको पहिलेभन्दा धेरै कम ह्यान्डल गर्न अनुमति दिईन् र स्यान्डबक्सबाट बाहिर urinates गरे। उनी अहिले २ र आधा महिना यस्तै व्यवहार गर्दैछिन्, यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले मेरो बिरालो बदलेको छ र उनी मलाई धेरै चिन्तित गर्छिन्। त्यहि समयमा, म उनलाई फेरि पशु चिकित्सकमा लैजान डराउँछु यदि यो फेरि उनको लागि एक दर्दनाक प्रक्रिया हुन्छ र उनको व्यवहार बिग्रन्छ। तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ? धन्यवाद
म उसलाई आगन्तुकहरूको उपस्थितिमा बिरालाहरूका लागि क्यान (भिजेको खाना) दिन सिफारिस गर्दछु। त्यसकारण, अलि अलि गर्दै उसले भेटघाटहरूलाई अति राम्रो चीजको साथ जोड्दछ, त्यसैले उनीहरूलाई पहिले जस्तो स्वीकार्नेछ।
फोहोर बक्स बाहिर पिसाब गर्न को लागी, spayed बिराला कहिलेकाँही मूत्र संक्रमण। अहिलेको लागि, म तपाईंलाई सल्लाह दिन चाहन्छु कि म सोच्छु कि सिरूल छैन, किनकि यो एक घटक हो जसले प्रायः खानाको एलर्जी गर्दछ।
यदि उनी सुधार गर्दैनन्, उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु राम्रो हुन्छ।
Gia araujo भन्यो
नमस्कार आज मेरो बिराला बाँझी छ, सत्य हो, वा मलाई थाहा छ कि ऊ सुन्दर वा बाँझी थिई कि त मैले यी सबै कुरा थाहा पाइन। तर तिनीहरूले मलाई भने कि एनेस्थेसिया संकेत भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ, उनी २ घण्टा उठी, उनी भाग्न चाहान्थिन्। मलाई डर लाग्छ किनभने उनीहरूले मलाई भोलिपल्ट खान पनि भने, तर hours घण्टा पछि उनी आफैं खाना खोज्छिन्, मैले केवल पाटे र केही बिस्कुट थप्नुपर्‍यो। उनी पनि असाध्यै निराश भइरहेकी थिइन र भाग्न चाहन्थिन्, तर उनी बेरिए मैले उसलाई आफ्नो ओछ्यानमा लगें तर उनी त्यहाँ हुन चाहिनन्। म उसको स्यान्डबक्स खोज्दै छु तर ऊ भित्र पस्न सकेन, मैले उनको लागि भूइँमा स्यान्डबक्स राखें र राम्रोसँग, म बस पेशाब गर्छु। अब ऊ ओछ्यानमा उफ्रियो। र मलाई लाग्छ यो हिट भएको छ। म तिमीलाई भन्दछु मलाई डर लाग्छ कि टाँकेहरू खुल्नेछन्, किनकि म उनको सफाई गर्दछु उनको शरीरको प्रकार फजिता, र उसको पट्टी छ। म चिन्तित छु उनी एक्लै छोड्नुहोस् जब उनी काममा जान्छन्। र मलाई थाहा छैन उनी कति दिन सम्म यस्तो हुन्छे। म धेरै चिन्तित र दु: खी छु। कृपया मलाई सहयोग गर्नु।
Gia Araujo लाई जवाफ दिनुहोस्
कहिलेकाँही हामी आवश्यक भन्दा धेरै चिन्ता गर्दछौं, म तपाईंलाई मेरो आफ्नै अनुभवबाट भन्छु 🙂।
पोइन्टहरु राम्रो तरीकाले राखिएको छ भने बन्द गर्नु हुँदैन। तपाईं एक सानो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको साथ घाउ सफा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो आवश्यक छैन।
प्रत्येक पटक ढोका बन्द भएको कोठामा यसलाई बाहिर जानुहोस् जब तपाईं बाहिर जानु पर्छ।
केही दिनहरूमा तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ।
फ्लोर कास्ट्रो भन्यो
नमस्कार सोमबार, जून 5, मेरो बिरालो बाँझ थियो। आज बुधवार जून 07 छ र ऊ खान वा पानी पनि लिन चाहँदैन। मलाई थाहा छैन यदि त्यो सामान्य छ वा यदि म पशु चिकित्सकलाई लैजान्छु वा के गर्छु। म चिन्तित छु कृपया मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्, मलाई यसको बारेमा केही थाहा छैन। म आशा गर्छु कि तपाईंले मलाई जवाफ दिनु भयो। धन्यबाद
FLOR CASTRO लाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, यो सामान्य छैन। अपरेशन पछि दोस्रो दिनमा बिरालोले सामान्य जीवन बिताउन सुरु गर्नुपर्दछ।
म उनलाई सिफारिस गर्न पशु चिकित्सकलाई लिन सिफारिस गर्दछु। केवल मामला मा।
नमस्ते! २ हप्ता अघि मैले मेरो बिरालो नीनालाई ग्रहण गरें, उनीहरु उनी2देखि months महिनाको उमेरको छनौट गर्दछन, त्यसैले अर्को दिन १ I म उसलाई नाटकको लागि लैजानेछु।
उनी धेरै राम्री र आश्रित बिराला, तर धेरै धेरै पोता। मुद्दा यो हो कि जब रात आउँछ, यातना दिइन्छ, उसले यसलाई आफ्नो सानो आइगिगको साथ खर्च गर्दछ ... र त्यसपछि उचाइबाट खेल्नका लागि म्याउहरूसँग, यो बिहान २ बजेदेखि बिहान from बजेसम्म हुन सक्दछ। मैले दिउँसो उनको खाना लिन र उनीसँग २ घण्टा खेल्ने र सुत्न अघि ढोका बन्द गर्न, उनलाई बेवास्ता गर्न उनलाई एउटा क्यान दिन सबै प्रयास गरेको छु ... तर यो बन्द हुँदैन ... म मरे तर समस्या यो हो कि मेरा छिमेकीहरूले पनि गुनासो गरेका छन् ... के उसको खेलको तीव्रता एकपटक उसले न्युरेरी भएपछि तल झर्छ? अब यो एक भूकम्प हो र विशेष गरी रात। उनी धेरै घण्टा एक्लो खर्च गर्दैनन् र म उसलाई थाँराउन खेल्ने प्रयास गर्छु तर कुनै चीज उसले काम गर्दैन। धन्यवाद!!
हो, सुरक्षित कुरा यो हो कि यो पर्याप्त शान्त हुनेछ।
जे भए पनि, उनलाई रातमा सुत्नको लागि तपाईंले खेलको साथ दिनको सकेसम्म उनलाई थाक्नु पर्छ। बलहरू, डोरीहरू, भरिएका जनावरहरू, ... कुनै खेलौनाले गर्दछ, कार्डबोर्ड बक्स पनि राख्नेछ जहाँ यो राख्न सकिन्छ (तिनीहरूलाई यो मनपर्दछ)।
शुभ रात्री, मैले मेरो बिरालोलाई कास्टेको आधा महिना भएको छ, तबदेखि उनी उत्साहका साथ एकदम कम रहिरहेकी छिन्, उनी दिनभरि सुतिरहेकी छिन् र उनी खेलिन चाहन्छिन, मलाई थाहा छ उनीहरू शान्त हुन्छन, तर म थाहा छैन कि त्यस बिन्दु सम्म
मलाई लाग्दैन कि उसलाई केहि खराब हुन्छ, तर यो अनौठो कुरा हो कि उसले त्यस्तो खेल्दा जस्तो महसुस गर्दैन। तपाईं यससँग कति पटक खेल्नुहुन्छ? स्ट्रिंगहरू वा तपाईंलाई मनपर्ने खेलौनाहरूमा रुचि छैन?
यसले पशु चिकित्सकलाई हेराइमा चोट पुर्याउँदैन, कुनै चीजले चोट पुर्याउँदैन वा कुनै पनि प्रकारको असहजता महसुस गराउँछ।
हाम्रो बिरालोको बच्चा सधैं धेरै मायालु थियो, उनी लापरवाह र अ and्गालो हुन मन पराउँछिन् तर उनी नसक्ने भए पछि (केही वर्ष पहिले) उनी हामीलाई उनको नजिक छिर्न दिउँदिनन्, जब हामी नजिक पुग्दा उनी पछि हट्छन् वा धेरै सार्दछन् ताकि हामी उनलाई जान दियौं। , हामी कहिले गर्दैनौं। उनी कुरिईन्छ वा खरोंच गर्छिन् तर हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि उनी हामी उनलाई छुने चाहनुहुन्न, यद्यपि कुनै अपरिचित उनको लागि आउँदा उसले आफूलाई (हाम्रो लागि कम) केही अवसरहरुमा आफैं पनि प्रस्ताव राखीदिन्छ, मैले स्पष्ट गर्नु पर्छ। यद्यपि उनलाई अनुमति छैन, उनी सँधै हामीसँगै जान्छन्। हामी कहाँ जान्छौं र ऊ आफ्नो खुट्टा वा खुट्टामा घुम्न मनपराउँछ जब हामी आर्मचेयरमा बस्छौं जब सम्म हामी उसको ठाउँलाई आदर गर्दैनौं। यो के हुन सक्छ?
बिरालाहरू उनीहरूको इन्द्रियबाट धेरै निर्देशन दिन्छन्, गन्धको विकासको साथ विकसित हुन्छ।
मलाई शंका छ कि एनेस्थेसियाबाट ब्यूँझदा उसले तपाईंको हातमा अपरिचित गन्ध याद गरेको हुनुपर्छ (वा आफैलाई), जसको कारणले गर्दा उसले अप्ठ्यारो महसुस गरेको हुनुपर्छ।
गर्नु पर्ने? यी अवस्थाहरूमा "स्क्र्याचबाट सुरु" आवश्यक हुन्छ। मानौं तपाई एक अर्कालाई चिन्नुहुन्न। उनको बिरालाको व्यवहार दिनुहोस्, र समय-समयमा एउटी भाँडोलाई "मिस" गर्न प्रयास गर्नुहोस् जब उनी खानेकुरामा ध्यान दिइरहन्छन्।
दिनको केही पल्ट उनको अनुहारको पलकमा हेर्नुहोस्, त्यसोभए उनीले थाहा पाउनेछन् कि तपाईं अपरिचित हुनुहुन्न, र कम दुष्ट पनि।
धैर्यवान हुनुहोस्। निश्चित रूपमा चाँडै भन्दा पछि तपाईं तिनीहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुहुनेछ।
नमस्ते मोनिका, २ दिन अघि मेरो बिराला KIRA, लगभग १० महिना पुरानो, २ ईर्ष्या उत्पन्न हुन अघि कास्ट्रे थियो तर, उनी पिउन वा केही खान चाहन्न, त्यसैले हामी उनलाई सिरिge्ग पानी दिन्छौं र x अब सबै ठीक छ, तर उनी गर्छिन केहि खानेकुरा छैन, तर हिंड्न सैंडबक्समा पेशा जान जान्छ, तर त्यसपछि उनी केहि जान्न चाह्दिन, क्रेस्ट्रेट हुनुभन्दा अघि म शपथ खान्छु कि ऊ संसारको सब भन्दा राम्रो बिरालो हो, ऊ चुपी छिन्, पागल! , ठूलो खेल्नुहोस्, सबै कुरा र हामी पूरै घर एक्स पनि दौड्यौं हामी दुई पागल व्यक्तिहरू दौडिरहेका थियौं 😂
अब मेरो प्रश्नहरु आउनुहोस्:
- के खाना र पानी सामान्य छ?
- र त्यो गर्न जारी हुनेछ
पुनश्च: हामीसँग अर्को पाल्तु जनावर कहिल्यै थिएन र हामीसंग अर्को gat छैन, र त्यसैले म यसको लागि धेरै नयाँ छु, धन्यवाद।
लारालाई जवाफ दिनुहोस्
यो सामान्य हो ... तर एक बिन्दु सम्म। उनलाई न्युटेर गरे पछि, बिरालालाई दुखेको छ र यो सामान्य छ कि उनी केही दिनको लागि खान र पिउन चाहँदैनन्।
के तपाईंले उसलाई भिजेको बिरालोको खाना (क्यान) दिने प्रयास गर्नुभयो? त्यसले उनको भूकलाई उत्तेजित गर्न सक्छ, तर यदि यो गर्दैन भने, उनी पशु चिकित्सकले हेर्नुपर्दछ।
तपाईंको अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा, ठीक छ, नेटरिंग पछि बिरालो प्राय: शान्त हुन्छ। तर खेल्ने इच्छा सामान्यतया फ्युरी ठूलो हुँदै जाँदा घट्दै जान्छ।
म क्वेरी बनाउन चाहन्थें, यसको क्यास्ट्रेसनसँग केहि सरोकार छैन तर तपाईले बिरालोहरू बुझ्नु भए जस्तै जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंलाई पनि त्यस्तै भएको छ वा तिमीलाई थाहा छ तर म मेरो बिरालाको गर्भवती भएकोमा चिन्तित छु र यो समय हो। लगभग अगस्त August मा जन्म दिन
बुधवार मेरो छोरालाई किन धेरै आक्रामक तरिकामा फ्याँकिएको हो भनेर जानेर, ऊ मेरो छिमेकीको सहयोगमा उन्मादिक पागल भएकी छिन जब हामीले उनलाई वाहकमा हालेका थियौं र मैले उनलाई आज बेलुका छोडेको छु जुन हामीले लिएका थियौ। उनको जब पशु चिकित्सक फिर्ता आयो, मेरो श्रीमान् उनको घर मा छोड्यो र हामी किनमेल गर्न गयौं तर जब उनी फर्किए ढोका भित्र छिर्दा, ऊ फेरि बार हाइस्टिरिकल, फूर्ति लगाएर र सिंहको जस्तो बढ्दै गयो।
हामीले उनलाई आफ्नै लागि कोठामा राख्यौं किनभने म उनलाई फुर्स्याउन सक्दिन
हिजो जब म उनलाई सफा गर्न गएँ र उहाँसँग केही समय बिताउन उनले मलाई बारम्बार फ्याँकिदिएझैं पागल हुर्किरहेको र नाort्गो पार्न
के तपाईंलाई यो व्यवहारको कारण थाहा छ?
एक वर्षमा ऊ हामीसँग भएको छ, ऊ कहिले पनि खराब इशारा गरेको छैन वा अहिलेसम्म केही पनि उत्तम छैन…।
यो तपाईको कुरामा हास्यास्पद छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँ गर्भावस्थाको कारणले वास्तवमा असहज महसुस गर्नुहुन्छ, वा तपाइँको बच्चासँग केहि भएको छ र अब तपाइँ सम्पूर्ण परिवारलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ।
गर्नु पर्ने? तपाईंले त्यो विश्वास पुन: प्राप्त गर्नुपर्दछ, र यसको लागि क्यान (भिजेको खाना) र खेलौना जस्तो केहि छैन। यो स्क्र्याचबाट शुरू हुने हो, जणु यो यो तपाईंले पहिलो पटक देख्नु भएको थियो। उनी तपाईंको नजिक नहोउन्जेल उसलाई लाज नमान्नुहोस्, र ठूलो स्वर हल्लाउनबाट जोगिनुहोस्। यसलाई बुझ्नको लागि समय निकाल्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ शरीरको भाषा, किनकि यसले तपाईलाई उनीसँग कुराकानी गर्न सजिलो बनाउँदछ।
नमस्कार, शुभ रात्री, करिब दुई वर्ष अगाडि मैले एउटा बिरालोको बच्चालाई अपनाएँ र एक बर्ष अघि मैले उनलाई अपरेट गर्न लियो तर उनी months महिनादेखि अति नै चर्को स्वरमा र बारम्बार आइरहेकी छिन्, सामान्य रूपमा राती अबेर, उनले मलाई सुत्न दिनुहुन्न र म उनीसंग के हुन्छ भनेर जान्न चाहन्छु यदि यो अपरेसन समय समयमा आउँछिन् उनीसँग एउटा बिरालोको बच्चा थियो तर करिब एक महिना अघि उनको मृत्यु भयो किनभने बिच्छीले उनलाई बिट्यो म कसरी जान्न चाहान्छु मेरो बिरालोको बच्चालाई मद्दत गर्न।
सम्भवतः बिरालोको बच्चालाई याद गर्नुहोस्। खैर, म घाटा महसुस गर्दछु 🙁
तपाईंले उनलाई रातमा सुत्ने बानीमा राख्नुपर्नेछ, दिनको साथ उनीसँग खेल्नुहोस्।
En यो लेख तपाईंसँग बढि जानकारी छ।
नतालिया लुसेरो प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
शुभ रात्री, एक महिना अघि मैले मेरो बिरालामा अपरेट गरें र उनी सँधै सक्रिय थिईन्, तर हामीले उनको शल्यक्रिया गरिसकेपछि उनी धेरै बढी सक्रिय र बढी कुराकानी भइन्, के यो सामान्य छ?
नतालिया लुसेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
यो हुन सक्छ, हो। तर तपाईले यो स्वस्थ छ भनेर निश्चित गर्नुपर्दछ, त्यसैले म यसलाई जाँचमा लिने सिफारिस गर्दछु। सम्भावना यो छ कि तपाईंसँग कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू छैनन्, तर किनकि बिरालाहरू पीडा लुकाउनमा माहिर छन्, एक पेशेवरले यसलाई हेर्नुको लागि चोट पुर्‍याउँदैन।
यस्तो हुन्छ कि उसले एउटा बिरालोलाई अपनायो र यसको एउटा कचौरा थियो, ऊ already महिनाको भइसकेको छ, म उसलाई बाँझो राख्न लागें र जब उनी एनेस्थेसियाबाट निको भए, उनी आफ्ना बच्चाहरूसँग जहिले पनि चोटपटक आउँदछन्, उनी हरबखत उहाँसँग भेट गर्छन्। उनीहरुलाई उनीहरुसँग4दिन सम्म रहेछ, उनीहरुलाई उनीहरुसंग छुट्टै कोठामा छ र स्पष्टतः उनी मनपराउँछिन् किनकि उनी त्यहाँ हुँदा उनीहरु वयस्कहरु संग मात्र अति मायालु छिन् यदि उसको युवा भित्र छिर्छ भने। उनि उनिहरुलाई आक्रमण गर्छिन्
म उसलाई बिरालोको बच्चालाई फेरि स्वीकार गराउन के गर्न सक्छु ???
दलियालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं बिरालाको बच्चाको ओछ्यान उनको नजिकै राख्न सक्नुहुनेछ, केही दिनको लागि एक अर्कालाई नदेखी।
बिरालोको बच्चालाई उनको ओछ्यानमा ल्याउनुहोस्, र अर्को दिन फेरी तिनीहरूलाई व्यापार गर्नुहोस्।
यस तरिकाले उनीहरू फेरि गन्धमा चल्नेछन्।
चौथो वा पाँचौं दिनमा, एउटै बिरालाको बच्चालाई आमासँगै लैजानुहोस्। यदि ऊ सुन्दरी छ भने यो सामान्य कुरा हो तर यदि उसले उसलाई आक्रमण गर्ने कोशिश गर्छ भने अर्को दिन फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
त्यहाँ एक उत्पादन छ जुन धेरैलाई मद्दत गर्न सक्छ जुन हो फेलिवे। यसले तिनीहरूलाई आराम दिन्छ। यो पशु चिकित्सा क्लिनिक र पशु आपूर्ति स्टोरहरूमा पाउन सकिन्छ।
नमस्ते! मेरो बिराला १० दिन अगाडि बाँझीएको थियो र जब उनले medicine दिनको औषधि पूरा गरिसकेपछि उनी बान्ता गर्न थालिन्, उनीले दिनको दुई चोटी काम गर्छिन्, उनको मुटु नै छैन र जब उनी बान्ता हुने बित्तिकै थोरै चाहनाले खाने कोसिस गर्छिन्, के हुन्छ म त गर्दिन किनभने उनी तौल घटाउँदैछन्। धन्यबाद।
माफ गर्नुहोस् तपाईंको बिरालो गलत छ 🙁
यस्तो अवस्थामा, पशु चिकित्सकमा जानु उत्तम हुन्छ। उसले के गर्ने थाहा छ।
मेरो बिरालाको बच्चा १ महिना पहिले शुद्ध थियो, तर तिनीहरू तातो थिए उनीहरूले शल्यक्रिया गर्नु अघि र उनी हामीबाट टाढा गइन्, मेरो प्रश्न हो, के उनी त्यहाँ प्रेममा फसेकी हुन सक्छिन्, उनीमा सामान्य बिरालोको बच्चा छ?
यदि उनी neutered थियो, होइन, त्यो बिरालाको बच्चा हुन सक्दैन।
नमस्कार, हिजो हामीले मेरो--महिना पुरानो बिरालाको बच्चालाई कास्टर्ड बनायौं र एनेस्थेसियाबाट उठेपछि हामीले उनलाई एउटा अनौंठो व्यवहार देख्यौं किनकि उहाँ मेरो घर छोड्न चाहानुहुन्छ र मलाई दुई पटक छतमा हेर्नुपर्‍यो, हामी नआएसम्म उसले उसलाई ढु stones्गा र उसका सबै चीजहरू भित्र लडाएर लग्यो .तर एक हेराईमा उनी घर छाडे र एक दिन हामी उनको बारेमा केहि पनि थाहा छैन। मैले सोधेँ कति छिमेकी म गर्न सक्छु र केहि पनि छैन।
त्यहाँ व्यवहारका लागि केहि व्यावहारिक व्याख्या छ किनकि यो घरमा बस्न चाहँदैन जस्तो थियो
सम्भवतः एनेस्थेसियाको कारण उनलाई धेरै अनौंठो लाग्यो।
तर मलाई लाग्दैन कि यो धेरै टाढा छ। बाहिर जानुहोस् र उसलाई खोज्नुहोस्। तपाईले यसलाई फेला पार्नुहुनेछ।
नमस्कार, केही हप्ता पहिले मैले मेरो बिरालालाई उनका दुई छोरीहरूसँग 8 हप्ताको जन्म पछि बाँझ पारेको थियो, अर्को दिन (एनेस्थेसिया पछि) मैले देख्यो कि आमा अन्य बिरालाहरू (छोरीहरू) सँग शोकमा डुबेको छ। उही कोठामा भएको।
उनी सबैको साथ अत्यन्त मायालु छिन्, घरको कुकुरलाई समेत, तर अन्य बिरालाहरूसँग उनी आक्रामक व्यवहार गर्दछिन, के यो व्यवहार सामान्य छ?
Suanyr लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, यो सामान्य हुन सक्छ। पशु चिकित्सा क्लिनिकमा हुँदा, तपाईंको कपालले त्यस ठाउँबाट गन्धहरू अवशोषित गर्नेछ। घर पुग्दा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एनेस्थेसियालाई निष्कासन गरेपछि उनीहरूले महसुस गरे कि उनीहरूले त्यस्तो गन्ध पाउँदैनन्।
आमा बिरालाले छोरीहरूको नयाँ गन्ध चिन्न सक्दैनन्, र त्यसले उनलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ किनभने यो त्यस्तो छ मानौं त्यो कुनै अज्ञात बिरालाहरूसँग छ।
गर्नु पर्ने? तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् जस्तो कि उनीहरू वास्तवमै एक अर्कालाई थाहा थिएन। यसमा तीन दिनसम्म कोठामा बिरालाहरू राख्नु र उनीहरूको ओछ्यानलाई कम्बल वा कपडाले ढाक्न समावेश छ। दोस्रोबाट, कम्बल वा कपडा साटासाट गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू अरूको गन्ध चिन्न सकून्। चौथो दिनमा, बिरालाको बच्चाहरूलाई फेरि सेट गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई अवलोकन गर्नुहोस्। यदि आमाले तिनीहरूलाई हेर्यो भने, यो सामान्य हो।
तिनीहरूसँग खेल्नुहोस्, र तपाईंले तिनीहरूलाई भिजेको बिरालोको खाना पनि दिन सक्नुहुन्छ। यी चीजहरूले तिनीहरूलाई फेरि स्वीकार गर्न मद्दत गर्दछ।
राम्रो! नौ दिन अगाडि हामीले मेरो बिरालोलाई कस्ट्रेट गर्यौं, उनी अहिले करिब months महिना पुरानो छ ... पहिलो दिन उनी अलि तल थिइनन् ... ती पनी दिनहरू पछि उस्तै थिए, उनले आफूलाई समात्न, खेलिन, सीढिमा चढ्न दिए। सबै सामान्य जत्तिकै हो, तर पछिल्लो रातदेखि मैले उनलाई अनौंठो महसुस गरें, उनी हामीतिर हाँस्छिन् जब हामी उनको तल्लो अंगहरूलाई सहारा दिन्छौं ... उनीमाथि चढ्न गाह्रो हुन्छ ... उनी एक्लै सुत्न रुचाउँछिन्… 😔 उनी सामान्य रूपमा खान्छिन् र पिउँछिन् ... मँ डोन गर्दिन। उसलाई बुझ्दिन। भोली बिहान म उसलाई जान्छु ... मलाई डर छ उनीसँग केहि छ -
कार्लोटालाई जवाफ दिनुहोस्
यद्यपि यो एकदम दुर्लभ छ, कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ कि बिरालोलाई नखोल्दा (वा महिला बिल्ली) यसको पछाडिको समस्या छ। तर मँ बुझ्छु कि ती राम्रा स्वास्थ्य समस्यामा पर्दछन्।
शुभ रात्री मैले एक बिरालोलाई एक महिना अघि अपनाएको थिएँ, उसले सामान्य रूपमा फोहोरको बक्स प्रयोग गर्‍यो, एक हप्ता अघि उसले यो गर्न छाड्यो र बगैंचामा पियर्स र पोपहरू रोकिदिए, मलाई थाहा छैन के हुन्छ मैले केहि पनि प्रयास गरेको छु तर म उनलाई पाउन सक्दिन। फेरि उनको ट्रे प्रयोग गर्न, भोली म उनीहरूलाई कास्ट्रेट गर्न जाँदैछु, म के गर्न सक्छु…।
बगैंचामा भएका बिरालाहरूले प्राय: ट्रेमा आराम गर्न छाड्छन्, किनकि जमीनमा सिधा गर्न तिनीहरूलाई बढी सहज हुन्छ।
उसको मन परिवर्तन गर्न, सामान्य बालुवाको सट्टामा ट्रेमा फोहोर प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई शान्त कोठामा राख्नुहोस्, जहाँ परिवार बाँच्दैन, र खाना र पानीबाट टाढा।
शुभ रात्री, म जान्न चाहन्छु किन मेरो बिरालाले weeks हप्ता सम्म अपरेट गर्यो र ऊ राम्ररी खान चाहन्न।
सायद यो चोट निको भएन। म उनलाई परीक्षाको लागि पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
म मेरो बिरालाको बच्चा ten दिन अगाडि के गर्छु कि उनी बाँझी थिईन् र जसमा उनले खाइन र म पिएकी छैन जुन मैले तीन दिनसम्म गरेको छु।
म पशु चिकित्सकलाई लिन सिफारिस गर्दछु। उसले के गर्ने थाहा छ।
पाउला सालाजार भन्यो
नमस्कार, हिजो ११/4 मैले एक वयस्क बिरालामा अपरेट गरें जुन हामीले एक महिना अघि अपनायौं, उनी त्यागिएकी थिइनन् तर उनी राम्रो प्रतिक्रिया दिइनन्, उनी घरबाट भागिन् तब उनी आइपुगे तर खान चाहिन र छिमेकीको घरमा लुक्छिन्, यदि उनी आफैंलाई लापरवाह हुन दिईन् भने, उनी याद गरी कि ऊ क्रोधित भई उसको घाउ स्वच्छ देखिन्छ। उसलाई के खान र पुन: आत्मविश्वास महसुस गराउन म के गर्न सक्छु? म कदर गर्छु
पाउला सालाजारलाई जवाफ दिनुहोस्
के यो बिरालो सडकमा बसिरहेको थियो जब तपाईले त्यसलाई अपनाउनु भएको थियो? यदि त्यसो हो भने, म तपाईंलाई भनेकोमा धेरै दु: खी छु तर वयस्क बिरालाको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ जुन घरैमा बस्न अनुकूल भइसकेको थियो।
यदि घटना त्यस्तो केसमा छैन, त्यो हो, यदि बिरालाले परिवारसँगै बस्‍यो भने, त्यसोभए उसलाई के हुन्छ होला भनेर उसलाई समय लाग्ने आवश्यकता छ। उनको बिरालाको व्यवहार दिनुहोस्, र उनीसँग धेरै धैर्यवान हुनुहोस्। बिस्तारै यो पारित हुनेछ।
तपाईंसँग बढि जानकारी छ यहाँ.
डायना गायतान भन्यो
नमस्कार, हिजो उनीहरूले मेरो बिरालाहरू (बिराला र बिरालो) कास्ट्रेट गरे, साढे cast महिना पुरानो, बिरालो सधैं धेरै मायालु र महान भएको छ तर उहाँ शल्य चिकित्साबाट बाहिर आईपुग्दा उनी बिरालोलाई कुरूप देख्दिनन् र उनलाई फ्याँकिए वास्तवमा धेरै आक्रामक छ, म के गर्न सक्छु कि उसले बिरालालाई स्वीकार्छ र उनीहरूले झगडा गर्दैनन्। धन्यबाद
डायना गाईटनलाई जवाफ दिनुहोस्
ती अवस्थाहरूमा तपाईंले उनीहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, मानौं कि उनीहरू एक अर्कालाई थाहा थिएन।
दुई मध्ये एकलाई तीन दिनमा कोठामा राख्नुहोस्, र ओछ्यान बदल्नुहोस्। जब तपाइँ एउटा पाल्नुहुन्छ, तुरुन्तै अर्को पाल्नुहोस् ताकि ती दुबै उस्तै गन्ध आउँदछ।
चौथो दिनमा तिनीहरूलाई फेरि ल्याउनुहोस् तर तपाईंसँगै।
यदि तिनीहरूले स्नोर्ट गरे यो सामान्य छ। तपाईं धैर्य हुनु पर्छ। तिनीहरूलाई भिजेको बिरालाको खाना (क्यान) दिनुहोस् ताकि तिनीहरू अधिक सहज महसुस गर्न सक्दछन्।
पाओला ओरोस्को आर। भन्यो
नमस्कार, हामीसँग दुई वर्ष भन्दा धेरै अघि सुन्दर क्रेओल बिराला छ (घरमा यो बिरालाको साथ पहिलो पटक हो र यो अद्भुत छ) हामीले उनको पहिलो जन्मदिन अघि उसको बाँझी बनाए, तर करिब दुई हप्ता अघि दुई बिरालाहरू नजिक आए, एउटा उनीहरु धेरै विश्वस्त छन्, उनी प्लास्टिकको झोलाको आवाजबाट डराउँदैनन् र घरमा प्रवेश गर्न खोजेका छन्, र हाम्रो बिरालोको बच्चा धेरै आक्रामक हुन्छ र अर्को बिरालोसँग जोडले कराउँछ, ऊ आफैंलाई हेर्छ र यो अझ बढी "सम्मानजनक" छ ", उहाँ हाम्रो घरको प्रवेशद्वारमा मात्र सुत्नुहुन्छ तर भित्र छिर्न प्रयास गर्नुहुन्न। हाम्रो राजकुमारीले उसको बानीमा केही परिवर्तन गरेको छ, विशेष गरी रातको सुत्ने समयमा, उनी मसँगै सुत्थिन् र अब रातभर मसँग सुत्छिन्, उनी शान्तपूर्वक निदाउँदिनन् र उनले आफ्नो समय सन्झ्यालमा "हेरिरहेकी" गरी र ढोका। घर र मलाई गुनासो छ ... .. हामी के गर्न सक्छौं?
पाउला ओरोस्को आर लाई जवाफ दिनुहोस्।
यदि तपाईंको बिल्लीको बच्चाले घर छोड्दैन भने, तपाईं प्रवेशद्वारमा बिराला रिपेलन्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। खुल्ला यो लेख हामी भन्छौ जुन सब भन्दा सिफारिस गरिएको हो।
र यदि यो बाहिर आयो भने, तपाईले कडा ताली बजाएर भाँडादारहरुलाई डराउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
२ महिना अघि मैले मेरो बिरालालाई नसक्ने बनाएको थिएँ जबकि ऊ तातो थिई, उनको घाउको पुनःप्राप्ति र उपचार एकदम राम्रो थियो, तर केही समयका लागि मैले महसुस गरें कि उनकी आमाहरू फुलेका थिए तर कुनै तरल वा बाहिर वा बाहिर आएन ताकि उनीहरूले उनको प्रेडिसोन दिए। २० मिलीग्राम १/2 एक गोलीको २ हप्तासम्म, सूजन अलि अलि हुँदै गएको छ तर तल स्तनहरू पनि भित्र पसेनन् मलाई पनि लाग्छ कि मैले उनलाई छोए पछि उनलाई कष्ट दिन्छु, उनी धेरै चंचल र खाइन्।
उनीसँग पहिरो भइसकेको छ।
र नसबंदी अपरेशन दायाँ पट्टि काटिएको थियो।
के यो हर्मोनल समस्या हो वा यो नसबंदी समस्या हो?
Carolay लाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, यो सामान्य छैन। त्यो ठीक छ कि एक धेरै राम्रो संकेत हो। तर, पशुचिकित्सक बिना, उनीसँग मनोवैज्ञानिक गर्भावस्था "जस्तो केही" हुन सक्छ।
तपाईंको बिरालो spayed, वा neutered गरिएको छ? पहिलो केसमा उनीहरूले के गर्छन् फेलोपियन ट्युबहरू जोड्छन् ताकि शुक्राणु अण्डाहरूमा पुग्न सक्दैनन्। अपरेशन धेरै सरल छ र बिरालो धेरै चाँडै निको हुन्छ। अवश्य पनि, तपाईं बिरालाको बच्चा गर्न सक्षम हुनुहुन्न तर गर्मी सक्छ।
अर्कोतर्फ कास्ट्रेसन एक अपरेसन हो जसमा प्रजनन ग्रंथिहरू हटाइन्छ। बिरालाले पनि दुई दिन पछि चाँडै नै उनको स्वास्थ्य लाभको लागि सुरू गर्न सक्दछ, तर हप्ता कम वा कम एक हप्ता नबितुन्जेल उनी राम्रो हुन सकेकी छैन। कास्टोरेशनको साथ, ईर्ष्या समाप्त हुन्छ, मनोवैज्ञानिक गर्भधारणको सम्भावना। लागत बढी छ।
त्यसोभए उनीहरूले के गरे बाँझो छ। अझै, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ कि पशु चिकित्सकसँग परामर्श लिनको लागि।
ओल्गा क्याम्पोस भन्यो
करीव months महिना अघि हामीले मेरा of ओरालाहरू, सबै वयस्कहरूलाई न्युटेर्यौं। दोस्रो हप्तादेखि तिनीहरूले धेरै अनौंठो व्यवहार गर्न थाले। मेरो कुकुरको बिरूद्ध धेरै आक्रमक, तिनीहरूले अनौंठो meows बनाउँदछन् र एकछिनको लागि अलग हुँदैनन्, न खाने र सुत्ने को लागि। स्पष्ट रूपमा ती मध्ये एक समूह नेतृत्व गर्दछ। यो कुनै पनि पहिले भएको थिएन, र यसले हाम्रो घर पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ। हामीलाई अब के गर्ने थाहा छैन। मलाई थाहा छैन यदि कसैले त्यस्तै केहि देखेका छन।
ओल्गा क्याम्पोसलाई जवाफ दिनुहोस्
वास्तवमा के भएको छ कि त्यहाँ गन्ध संघर्ष भएको छ। मलाई व्याख्या गर्नुहोस्: जब बिराला पशु चिकित्सकमा जान्छ र विशेष गरी जब यसलाई अपरेट गर्नुपर्दछ वा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ, यसले पशु चिकित्सा क्लिनिक / अस्पतालको गन्ध धेरै लिन्छ। एक पटक त्यो पशुलाई घर फिर्ता ल्याएमा, यदि यो अधिक भ्यागुरु जनावरहरूसँग बस्दछ भने, निश्चित रूपमा, यो फरक फरक गन्ध महसुस गर्दछ।
बिरालाहरू गन्धले धेरै निर्देशित हुन्छन्; तसर्थ तिनीहरू प्रत्येक दिन वस्तुहरू र वस्तुहरू विरुद्ध हामी मासु गर्दछन्। यो उनको परिवारको रूपमा आफूलाई चिनाउने एउटा तरिका हो।
तपाइँको केसमा, म तपाईलाई सिफारिस गर्दछु कुकुर भर्खर तपाईको घरमा आएको छ। फेरी तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। अलि अलि गर्दै र बिस्तारै। कुकुरलाई बिरालाबाट केहि दिनको लागि अलग राख्नुहोस्, र ओछ्यान बदल्नुहोस्। जब तपाईले देख्नुभयो कि बिरालाहरूले ओछ्यानमा पहिले नै राम्रो महसुस गर्यो, त्यस मध्ये एउटा लिएर र कुकुरलाई त्यहीं लैजान्। उसले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ हेर्नुहोस्। उनको घिसार्नु वा बेवास्ता गर्नु सामान्य कुरा हो, तर यदि तपाईले उनीमाथि आक्रमण गर्न चाहान्नु हुन्छ भने उसलाई फेरि पछाडि धकेल्नुहोस् र अर्को बिरालो समात्नुहोस्। यदि सबै ठीकठाक छ भने, उसलाई कुकुर संग छोड्नुहोस् र अर्को बिरालो लिन जानुहोस्।
यहाँ कुरो कुकुरको उपस्थिति लाई अभ्यस्त गर्न को कुरा हो। अलि अलि गर्दै, तिनीहरूलाई अत्यधिक तौल बिना। तिनीहरूसँग खेल्नुहोस् र तिनीहरूलाई समान स्नेह दिनुहोस्।
तपाई धेरै धैर्यवान हुनुपर्दछ, तर बिस्तारै स्थितिमा सुधार हुन्छ।
यो केवल पूसको स be्ग्रह हुन सक्छ, तर म यसलाई सिफारिस गर्न पशु चिकित्सकलाई लिन्छु।
नमस्कार मसँग बारमा धेरै बिरालाहरू रहेका छन्, तिनीहरू अति मायालु छैनन्, तर तिनीहरू आफैंलाई स्याहार गर्न दिन्छन्, जब म तिनीहरूलाई खुवाउँछु तिनीहरू दौडेर आउँछन् ... गत वर्ष मैले बिरालाहरू मध्ये एक पाएको थियो र उनीहरूले उसलाई मसँगै फर्काइदिए। एलिजाबेथन कलर अन। म उनलाई ठीक अवस्थामा लिन मेरो घरमा लगें र पहिलो दिन उनी अलि अनौंठो थिईन् तर उनले तुरुन्तै रुपान्तरण गरिन् र बढी मायालु पनि भइन्।
१२ दिन अघि मैले अर्को--महिना पुरानो बिरालालाई कास्ट्रेट गर्नका लागि लिएँ, जुन उनी थोरै नै हामीले समात्ने, हेरचाह गर्ने, अर्थात्, उनी हाम्रो लागि प्रयोग गरिन्। उनीहरूले मलाई यो गलाको हार बिना फर्काइदिए, र तिनीहरूले मलाई आफैंमा राख्न भन्यो, ताकि उनी वाहकमा नआउनून्। जब मैले यो मेरो घरको माथिल्लो भागमा खोलेको भए, ऊ दगुर्दै बाहिर आई अनि मलाई नेकलेस लगाउन उसलाई समात्न पनि समय भएन। ऊ लुकायो, र केवल बाहिर खान गए (क्यान, तपाइँको सिफारिश अनुसार) यदि भुइँमा कोही छैन भने। दुई दिन पछि उनले खाना खान छोडिदिए, र तीन दिन पछि जताततै उनलाई हेरेपछि मैले थाहा पाए कि उनी छतमुनि पसेकी थिइन र days दिन जानु भन्दा पहिले कुनै चीज नखाईकन म बाहिर वा बाहिर जाँदा मैले ढोका खोलेर उनलाई बोलाएँ। त्यस बेलादेखि उनी यस्तै रही रहिछिन्, उनी केवल एक्लो छ भने मात्र खान्छिन्, र यदि म उनको नजिक जान चाहन्छु भने उनी स्नान्ट्स गरी भाग्छिन् (उनले पर्खालहरू बीचको खाली ठाउँ पनि फेला पारेकी छ जुन मलाई थाहा छैन) उनीसँग छ पूरै जंगली बन्नुहोस्। तपाईं समाधान को लागी सोच्न सक्नुहुन्छ? मैले क्यानहरू प्रयोग गरेको छु, मैले खानेकुराको गन्धको साथ लुगा छोड्ने प्रयास गरें ... र केही पनि छैन
शुयालाई जवाफ दिनुहोस्
"अन्धाधुन्धमा नपरोस्" भन्ने क्रममा, म कसैलाई सिफारिस गर्न जाँदैछु जसको म व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा गर्दछु र धेरै सम्मान गर्दछु: लौरा ट्राइलो (फ्लाइन थेरापीबाट)। उनको काम गर्ने विधि सबैलाई अपील नगर्न सक्छ (उनले बाख फूल, रेकी, आदि प्रयोग गर्दछ), तर म बिरालालाई माया गर्ने र बुझ्ने कसैलाई पनि चिन्दिन। पक्कै पनि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। फेसबुक छ।
नमस्ते! हिजो मेरो बिरालाको बच्चालाई कास्ट्रे, मेरो बिराला डेढ बर्षको र बच्चा months महिनाको छ। जब म उनलाई कास्टि from गर्नबाट फर्केर आएँ, उनले बच्चाकी आमा बनाइन् र उनलाई स्क्र्याच गर्ने कोशिश गर्छिन् र त्यहाँबाट उनी बढ्न छोड्दैनन्। म धेरै चिन्तित छु तिनीहरू कहिल्यै नराम्ररी सामना गर्न सकेनन्। बच्चा आमाको नजिक जान चाहान्छ र ऊ उसलाई काँड्न दिउँदिन। सहयोग
चिन्ता नलिनुहोस्, यो सामान्य हो। बिरालाको बच्चाले पशु चिकित्सा क्लिनिकबाट गन्ध ल्यायो, र जब आमाले उनलाई फेरि भेट्छिन्, उनी ती गन्धहरू चिन्न सक्दिनन् त्यसैले उनी अस्वीकार गर्छिन्।
यस अवस्थामा के गर्नुपर्दछ बिरालाको बच्चालाई room-। दिन कोठामा राख्नुपर्दछ, ओछ्यानसहित जुन दोस्रो दिनदेखि आमासँग आदान प्रदान हुन्छ। त्यस समय पछि, उनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ जस्तो उनीहरू एक अर्कालाई थाहा नै थिएनन्: थोरै भएमा, यदि सम्भव भए विभक्त अवरोधको माध्यमबाट जसलाई तिनीहरू देख्न सकिन्छ र गन्ध लिन सक्छन्।
तपाईंले दुबैलाई एकै समयमा धेरै माया, र भिजेको खानाको क्यान पनि दिनु पर्दछ।
के तपाईंले मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले २ दिन अघि चन्द्रमामा मेरो १ वर्षीया बिरालाको बच्चाको शल्यक्रिया गरेकी छिन्, उनी निराश र मायालु छिन्, आज उनी चल्छिन्, तर जब उनी म र बाल्कसको कुकुरसँग सम्पर्क गरे, हामी तपाईंसँगै छ। आफैलाई उनीहरुको सवारीको स्थितिमा राख्नुहोस्, ऊ meow गर्दैन, वा भुइँमा स्पिन; सामान्यतया उनी आफूलाई हेरचाह गर्न दिउँदिन, केवल तातो हुँदा (उनी मात्र २ थिइन) र अब यदि उनीले आफ्नो टाउको दुखाइदिन्छे र उसले आफ्नो टाउको बादलमा खसाली, म चिन्तित छु, के यो सामान्य छ? म पढ्छु जब उनीहरूले डिम्बग्रन्थी ऊतकको अवशेष छोड्छन्
यो सामान्य छ कि उहाँ अपरेसन पछि पनि अलि खराब हुनुहुन्छ। जे भए पनि, यदि तपाईले देख्नुभयो कि २ वा days दिन बढी बित्दछ, वा यदि उसले खान बन्द गर्छ भने, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार, शनिबार राति मेरो बिरालोलाई तुरुन्तै अपरेट गरियो, उनी गर्भवती थिईन् तर भित्रका बिरालोका बच्चाहरू मरेका थिए र उनको गर्भपतन भइसकेको थियो। अघिल्लो बिहिबार हामीले उनलाई बिहान रगत र एउटा भिजेको पुच्छरको ट्रेसको साथ छोड्नुभन्दा पहिले देख्यौं, हामीलाई लाग्छ कि उनी श्रममा गइरहेकी छिन। हामी उनलाई फेरि शनिबार दिउँसो सम्म देख्न सकेनौं, उही पेटसँग। मध्यरातसम्म, हामीले देख्यौं कि उनी चिसो भइरहेको छ र हामीले उनको गुदामा मायाइसिस पत्ता लगायौं। हामी उनलाई पशु चिकित्सकमा लग्यौं, र4घण्टा पछि जुन उनी सीरममा थिईन् र उनको तापक्रम पुनः प्राप्त गर्न कोशिस गरे, उनीहरूले उनलाई कास्ट्रेट गरे। हामी आइतबार दिउँसो उनलाई टिप्यो। यद्यपि ऊ एकदमै कमजोर थियो, त्यो दिन ऊ हामीलाई पछ्यायो। उनी राम्रो गर्दैछिन् यद्यपि उनी दिनभरि सुत्न रुचाउँछिन्। ऊ ओछ्यानमा चढ्छ, तर मलाई चिन्तित पार्ने कुरा यो हो कि उसलाई आफ्नो तापक्रम समात्न गाह्रो भइरहेको छ, र यद्यपि उनी सामान्य रूपमा पिउँछन्, बलुवा पेटीमा जान्छन्, उनलाई भोक लाग्दैन। हामी यो सताईन्छौं, मलाई लाग्छ, र जबसम्म हामी हात हान्दैनौं, यसले खाँदैन
जो, म धेरै दु: खी छु 🙁
के तपाईंले बिरालाहरूको लागि थोरै दूधको साथ खाना मिश्रण गर्न प्रयास गर्नुभयो? वा अन्यथा, तपाईलाई मनपर्न सक्ने फिड छ।
सामान्यतया म यसलाई सिफारिस गर्दिन किनकि संरचनाले चाहिने धेरै छोड्दछ, तर यस्तो अवस्थामा यसले सामान्यतया काम गर्दछ: मर्काडोना बिरालोको खाना। जसरी किबल एकदम सानो छ र स्पष्ट रूपमा दूधले भिजेको छ, बिरालाहरूले यसलाई धेरै मन पराउँछन्।
धेरै प्रोत्साहन। म आशा गर्दछु ऊ निको हुन्छ।
matilde मर्सिडीज becerril peralta भन्यो
शुभ प्रभात मलाई सहयोग गर्नुहोस् !! किनकि मेरो बिरालाको बच्चा लगभग months महिना अघि शल्यक्रिया गरिएको थियो, त्यसले मेरो बिरालोलाई मृत्युबाट (नसर्जित) घृणा गर्‍यो र उनीहरू राम्ररी सँगै पुग्नु अघि उनीहरू एक अर्कालाई धेरै माया गर्थे, उनीहरू अब सँगै बस्न सक्दैनन् किनकि उनीहरु सुँघेर र बिन्दुमा धेरै कडा संघर्ष गर्छन्। त्यो बिरालाले पशुवाचकलाई बिरालामा पठायो जुन उसले उनलाई पंजामा दिएको थियो र अब तिनीहरू छुट्टै कोठामा बस्छन्, मलाई थाहा छैन के गर्ने, मलाई सल्लाह दिनुहोस्।
Matilde मर्सिडीज becerril peralta जवाफ
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु पढ्न यो लेख.
र धैर्यता। बिस्तारै यसलाई हल गरिनेछ।
शुभ रात्री, हिजो सोमबार तिनीहरूले बिहान मेरा बिरालाको बच्चाहरूलाई कास्ट गरे, अहिलेसम्म उनीहरू खाने र पिउन चाहँदैनन् (यो already 35 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो)।
मैले तिनीहरूलाई पहिले नै कुनै पनि समस्या बिना एन्टिबायोटिकको2खुराक सिरिन्ज गरिसकें, तर मलाई चिन्ता छ कि उनीहरू खाना चाहँदैनन्। यो सामान्य हो?
निस्सन्देह, यदि उनी आज केहि खान चाहन्नन् भने, उनले उनलाई पशु चिकित्सकमा देख्नुपर्नेछ।
लेडी बर्नेल भन्यो
शनिवार दिउँसो शुभ बिहान मैले मेरो बिरालोलाई लिएँ र यसलाई बाँझ बनाएँ र त्यहाँ परिवर्तनहरू छन् जुन यो म्याओ गर्न चाहँदैन, उस्तै छैन म चिन्तित छु
लेडी बर्नेललाई जवाफ दिनुहोस्
अपरेशन पछि केहि दिनको लागि तपाईलाई अस्वस्थ महसुस गर्नु सामान्य हो। जे भए पनि, यदि उसले खान रोकिन्छ, वा पहिले जस्तो खाँदैन, वा यदि तपाइँ उसलाई सुस्त देख्नुहुन्छ, म उनलाई पशु चिकित्सकमा लैजाने सिफारिस गर्दछु।
नमस्कार एउटा भुतुरो बिरालो मेरो काममा आई र kit बिरालाको बच्चा थियो र एक महिना पछि, मैले उनलाई बाँझ पारे र उसको व्यवहार परिवर्तन गर्यो, उनी दिनको धेरै सुतिन् र खानेकुरामा उत्रिन् र रातमा उनी बाहिर गइन्, तर साढे २ पछि महिनाहरु उनी रातमा बाहिर गइन् र फर्केर आइनन् ... मेरो प्रश्न हो, के उनी फेरि तातो भइन्?
Yenny लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि ऊ निर्जीव छ (र कास्ट्रेट गरिएको छैन) ऊ तातो हुन सक्थ्यो। यदि छैन भने, यो असम्भव छ।
कास्ट्रेसन भनेको ग्रन्थिहरूलाई हटाउनु हो, र तातो हुने सम्भावना पनि हटाइन्छ; नसबंदीको साथ के गरिन्छ ट्यूबहरू बाँध्नको लागि हो, तर ताप राख्दछ।
नमस्ते, मसँग बिरालो छ (एक बर्ष भन्दा अघिको पुरानो) र बिरालो (करीव years वर्ष पुरानो) जो एक अर्कासँग अचम्मका साथ साथ जान्छन्, दुबै राम्ररी।
अगस्तमा मैले सडकमा वयस्क बिराला भेट्टाएँ, चिप बिना नै, र विभिन्न पशु चिकित्सकहरू, फेसबुक, व्हाट्सएप र अरूहरूद्वारा विज्ञापन फिल्म खिचे पछि कसैले पनि उनलाई दावी गरेको छैन।
मेरा बिरालाहरूले यसलाई स्वीकार्दैनन्: तिनीहरू छुट्टै कोठामा छन्, तर यदि गल्तीले तिनीहरू भाग्छन् र सँगै हुन्छन् भने, मेरो घरका बिरालाहरूले तिनीहरूलाई तिनीहरूमा फ्याँक्नेछन्। नयाँ बिराला उनीहरुमा सान्त्वना दिन्छ, भयभीत, तिनीहरू नजिक हुन चाहँदैनन् किनकि उनीहरूले उनलाई हमला गर्छन् (उनी कहिल्यै आक्रमणको थालनी गर्दैनिन, उनी आफैलाई बचाएर जवाफ दिउँछिन्)
हरेक दिन उनीहरूले कोठा साटासाट गर्छन्, र तिनीहरू कसैको गन्धहरू अस्वीकार गर्दैनन्, किनकि तिनीहरू सुत्नका लागि समान स्थानहरू प्रयोग गर्दछन्, समान स्यान्डबक्सहरू र समान सबै।
त्यहाँ के सम्भावना छ कि यदि मैले नयाँ बिराला कास्ट्रे भने मेरा बिरालाहरूले उसलाई थोरै स्वीकार गर्नेछन्? चाखलाग्दो कुरा यो हो कि मैले उनलाई भेट्टाए पछि, मलाई लाग्छ कि उनी कहिल्यै तातो भएकी छैनन् (उनी बिरलै देखिन्छिन् र कहिले उम्कने कोशिश गर्दैनन्)
कुनै श doubt्का बिना, यदि तपाईं बिराला ढल्काउनुहुन्छ भने, सबै कुराले धेरै सुधार गर्न सक्छ।
तर हो, यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, यो पुन: प्राप्ति नभएसम्म यसलाई कोठामा छाड्नुहोस्, किनकि यसले पशु चिकित्सकबाट गन्ध ल्याउनेछ र बिरालाहरूलाई त्यस्तो मनपर्दैन।
उत्साह, कास्टिंग भइरहेको छैन, पक्कै पनि यो भएको छ, तर यसले लक्षणहरू देखाउँदैन
नमस्कार, आज मैले मेरो बिरालाको बच्चालाई neutered गर्न सकें। उनीहरूले चेन मेल र एलिजाबेथन कलर राखेका छन् जसको साथ उनी राम्रोसँग प्राप्त गर्दैनन्। मैले उसको लागि एउटा कोठामा सबै चीजहरू लगाएको छु। मेरो समस्या यो हो कि म बिहान सब काम गर्दछु र मलाई चिन्ता छ कि म or वा १० घण्टा एक्लै बिताउछु। के यो गम्भीर समस्या हो? तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद
आदर्श रूपमा, उनी एक्लै हुनुहुन्न, तर म तपाईंलाई यो पनि भन्नेछु कि यदि उनीहरूले जाल र कलर राखेका छन् भने उनलाई आफैलाई चोट पुर्याउन गाह्रो छ।
साहसी, केहि दिनमा यो फेरी ठीक हुन्छ 🙂
नमस्ते, मलाई हिजो मद्दत चाहिएको छ, मैले मेरो बिरालोको बच्चामा शल्यक्रिया गर्‍यो र उनी परिवर्तन भएको छ, उनले मलाई काट्न थाल्छिन् र आज उनी गइन् र म फर्किएकी छैन। म व्याकुल छु, म सुत्न सक्दिन। यो धेरै चोटि गरे तर यसले मलाई अहिले चिन्तित गर्यो किनकि यो भर्खरै अपरेट गरिएको छ। मलाई उत्तर चाहिन्छ
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं पहिले नै फिर्ता आउनुभएको छ। सिद्धान्तमा, रिस कम भएपछि, यो फिर्ता आउनु पर्छ।
WANTED संकेतहरू, र तपाईंको घर बाहिरको स्यान्डबक्स राख्नुहोस्। यस तरीकाले तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने जान्न सक्नुहुन्छ।
नमस्ते, मलाई समस्या छ, मेरो बिरालालाई बाँझो बनाइएको छ र यस अघि उनी बिरालाको बच्चाहरू थिए, तिनीहरू months महिना पुरानो छ, तिनीहरू are वर्षका छन्, सबै तीन महिला छन्, र अब, नस्यनिर्मित छन्, उनी उनीहरूलाई आक्रमण गर्छिन्, मलाई मद्दत चाहिन्छ plz। मलाई डर लाग्छ कि मैले एउटा बिरालोको बच्चालाई चोट पुर्याउला
म आमालाई जवान देखि अलग राख्ने सिफारिस गर्दछु जबसम्म उनी पूर्ण रूपमा निको हुँदैनन्। तपाइँ पक्कै पनि अनौठो महसुस हुनेछ, पशु चिकित्सक क्लिनिक को गन्ध को गन्ध, र घाव को अस्वस्थता संग।
जब तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईंको मुड सामान्यमा फिर्ता जान सक्छ।
नमस्ते, म मेरो month महिनाको बिरालोको बारेमा चिन्तित छु। हामीले १6दिन अगाडि उनको कस्ट्रेट गर्‍यौं, त्यस समयमा सबै कुरा ठीकठाक थियो, १० दिन पछि टाँके हटाइयो, सबै ठीक छ। करीव days दिनदेखि उसले मलाई रोक्न रोकेको छैन। ऊसँग खाना छ, ऊ दु: खमा परेको देखिदैन, पृथ्वी सफा छ, हामी उनलाई सबै कुरा देखाउँदछौं ... तर जब उहाँ सुत्ने बेलामा हुनुहुन्न (सामान्यतया १२ देखि १ h घण्टा सम्म) उसले हाम्रो ध्यान खिच्नको लागि सबै समय दिन्छ, विन्डोजमा, तर अर्को कोठामा भुईंमा पसेको पनि। के यो सामान्य छ? तिनीहरू धेरै लामो र ठूलो मे .हरू हुन्
जिज्ञासु हुनुहोस् तपाईले के टिप्पणी गर्नुभयो। जे भए पनि म उनलाई डाक्टरलाई जाँच गर्न सिफारिस गर्दछु यदि उनलाई कुनै प्रकारको पीडा वा असुविधा छ भने।
र यदि ऊसँग केहि छैन भने, यो अझै पनि उसले अपनाएको एक प्रथा हो। यदि उसले तपाईंले भनेको सबै हेरचाह प्राप्त गरिरहेको छ भने, यो अनौंठो हुनेछ यदि यो कुनै गम्भीर कुराको लागि हो।
नमस्कार, days दिन अघि उनीहरूले मेरो बिरालोलाई कास्ट्रेट गरे र अब उनी केवल ओछ्यानमा वा उनको पाखुरामा बस्न चाहन्छन् उनी दिन खेल्नु अघि, उनी पनि थोरै खान्छिन् र केवल स्यान्डबक्समा जान्छन् यदि हामी उनलाई लिन्छौं भने मलाई थाहा छैन कि उनी सामान्य वा बिरामी छिन्
सिद्धान्त मा यो सामान्य छ। तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ र आफ्ना प्रियजनहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ
तर यदि एक हप्ता भन्दा बढि जान्छ, र तपाइँ थोरै खान जारी राख्नुहुन्छ भने एक पेशेवरसँग परामर्श लिन उचित हुनेछ।
नमस्ते मेरो बिरालोको बच्चा को लागी मैले उसको २ भाइहरुलाई बाँझो पारेन, अब मेरो १० महिनाको बिरालोको बच्चा २ हप्ता पहिले गायब भयो मँ सधैं उसलाई रेना जस्तै व्यवहार गर्थें
Senen लाई जवाफ दिनुहोस्
जे भयो त्यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं। पोस्टर लगाउन को लागी हेर्नुहोस् र छिमेकीहरुलाई भन्नुहोस् कि उनीहरुले यो देखेका छन्।
सायद यो नजिकै लुकेको छ।
मेरो बिरालो फोहोर बक्समा जान सक्दैन, किन?
किन मेरो बिरालोले मलाई मालिश गर्दछ